ခဈြရငျ အဖုတျယကျပေး - Owl Myanmar News
ကြှနျမတို့ မိနျးကလေးတှဟော ပြှမျးမြှအားဖွငျ့ အသကျ (၁၃)၊ (၁၄)နှဈလောကျမှာ ရာသီသှေးစပျေါပွီး အပြိုဖျေါဝငျကာစဖွဈပါတယျ။ အစပထမမှာ လစဉျမမှနျသေးပမေယျ့ ပြောကျလိုကျပျေါလိုကျနဲ့ အစပွုပွီး နောကျပိုငျးမှာလစဉျမှနျသှားပါတယျ။ဒီလိုရာသီသှေးစပျေါပွီး အပြိုဖျေါဝငျပွီဆိုတာနဲ့ ကြှနျမတို့ မိနျးကလေးတှရေဲ့ ခန်ဓာကိုယျထဲက ဟိုမုနျးဓါတျတှဖှေံ့ဖွိုးပွောငျးလဲမှုကွောငျ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ နှဈမြိုးစလုံးမှာ ပွောငျးလဲမှုမြား သိသိသာသာဖွဈပျေါလာပါတော့တယျ။ အခဈြစိတျဆိုတာလညျး အဲဒီအခြိနျကစပွီး ကြှနျမတို့ရဲ့စိတျထဲမှာစ၍ သန်ဓတေညျခဲ့ရပါတယျ။ငယျစဉျခလေးဘဝတုနျးက မိနျးခလေးသဘာဝလှခငျြပခငျြတာရှိခဲ့ပမေယျ့ အပြိုဖွဈလာတာနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့အလှအပတှကေို ဆနျ့ကငျြဘကျလိငျယောကငြ်္ားလေးတှေ သတိထားမိစခေငျြတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့အလှအပကို ယောကငြ်္ားလေးတှမွေငျစခေငျြတယျ။ ဂရုတစိုကျရှိစခေငျြလာပါတယျ။ဒီအခြိနျမှာဘဲ ကြှနျမတို့မိနျးခလေးတှရေဲ့ စိတျထဲမှာ ယောကငြ်္ားလေးတဈဦးတဈယောကျကို စှဲလနျးတာမြိုးအဲဒီယောကငြ်္ားလေးနဲ့ အတူအနားမှာရှိနတော ရငျထဲမှာကွညျနူးကနြေပျနရေတာမြိုးတှကေနစေပွီး အဲဒီယောကငြ်္ားလေးကနေ ကိုယျ့ကိုလာပွီးထိတာကိုငျတာ၊ နမျးတာမြိုးတှကေို လိုလိုလားလား ဆန်ဒတှဖွေဈပျေါလာတတျပါတယျ။
ဒီကနစေပွီးကြှနျမတို့ မိနျးခလေးတှဟော ရညျးစားတှထေားကွပွီး ကာမမှုကို ရှေးရှုလာပါတော့တယျ။ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာပွောငျးလဲမှုတှမှောလညျး ဒီအခြိနျမှာ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ အင်ျဂါရပျတှပွေညျ့စုံလာပွီဆိုတော့ သှေးသားတှဆေူဖွိုးထကွှလာတာကလညျး မဆနျးလှပါပေ။အခုဆိုလြှငျ စိမျးလဲ့ခငျ လို့ချေါတဲ့ကြှနျမအသကျဟာ (၂၀)နှဈပွညျ့ပွီးသှားပါပွီ။အိမျမှာတော့ မိစိမျးလို့ပဲ ချေါကွပါတယျ။ကြှနျမက ရတနာပုံတက်ကသိုလျမှာ (…. )ဒုတိယနှဈ ဖွပွေီးပါပွီ။အခုနှဈတော့ ကိုဗဈဖွဈနတောကွောငျ့ ကြောငျးတှပေိတျထားလို့ အိမျမှာပဲနားနရေပါတယျ။ဒီအခြိနျထိတော့ ကြှနျမမှာရညျးစားခဈြသူရယျလို့ မရှိသေးပါဘူး။ကြှနျမက အနအေေးတာလဲ ပါတာပေါ့ရှငျ။ပွီးတော့ ကြှနျမက ယောကျြားလေးတှကေို မယုံဘူး။ရညျစားထားပွီး ဗိုကျကွီးတာတှေ ဖကျြခတြာတှကေ နားနဲ့မဆနျ့အောငျ ကွားနရေတာလေ။ရညျးစားလေးထားမိပါတယျ မယုံရတဲ့သူဆိုရငျ အတငျးလုပျသှားမှာလေ။အဲဒါကွောငျ့ပဲ ရညျးစားမထားပဲ နခေဲ့တာပါ။ဒါပမေဲ့ တဈနမှေ့ာတော့ အဲဒီ တဈနလေ့ေးအကွောငျးကို ကြှနျမပွောပွပါမယျ။
ကြှနျမတို့ အိမျကနှဈထပျအိမျပါ။ အပျေါထပျမှာက အမရေဲ့အမကွီးတို့ သားအမိနပွေီး အောကျထပျကတော့ ကြှနျမတို့နပေါတယျ။ကွီးဒျေါရဲ့ အပျေါထပျကို အိမျဘေးကလှခေါးကနတေကျရပွီး သူတို့လှခေါးခွရေငျးနဲ့ ကြှနျမတို့အိမျအောကျထပျ ဝငျပေါကျနဲ့က ကပျနတေယျ။ ကွီးဒျေါရဲ့သား ကြှနျမအကိုဝမျးကှဲက (…..)အလုပျလုပျပါတယျ။ နာမညျက ဇျောဖွိုးလို့ချေါပွီး အသကျက(၃၄)နှဈလောကျရှိနပွေီ။ ကြှနျမ အမကေ အိမျဆိုငျလေးဖှငျ့ထားပွီး အဖကေတော့ အရောငျးဝယျလုပျတာမို့ အမွဲလိုလို အိမျမှာမရှိပါဘူး။အမကေလဲ ဆိုငျထဲမှာပဲ ဈေးရောငျးနတေော့ အိမျမှာက ကြှနျမတဈယောကျထဲပါပဲ။တဈနကွေ့တော့ ညနမှေောငျစပြိုးနတေဲ့အခြိနျမှာ ရခြေိုးပွီးလို့ အိမျဝငျပေါကျ ထှကျပေါကျဘေးမှာ ထောငျ့ဖွတျလေးထိုငျပွီး လမျးပျေါကိုလှမျးငေးကွညျ့နလေိုကျပါတယျ။
အဲဒီအခြိနျမှာပဲ အပျေါထပျလှခေါးကနေ အကိုကွီးဇျောဖွိုးက အောကျဆငျးလာပါတယျ။ရခြေိုးမလို့ဆငျးလာတာပါ။ဘာရယျမဟုတျဘူး ကြှနျမလဲ ကိုကွီးကို ကွညျ့လိုကျရငျး အမှတျမထငျ ကိုကွီးရဲ့ပေါငျကွားနရောကို ကွညျ့လိုကျတော့ ရှကေို့ ထိုးထှကျနတေဲ့ အရာကွီးကို တှလေို့ကျရပါတယျ။အဲဒါက ယောကျြားတဈယောကျရဲ့ လီးတနျကွီးဆိုတာ သိလိုကျရတော့ ကြှနျမစိတျတှကေ ဖကျြကနဲ လှုပျရှားသှားရပါတယျ။ “ဟငျ ကိုကွီးလီးကွီးက တောငျနပေါလား အကွီးကွီးပဲ လို့ တှေးရငျး ကြှနျမစောကျဖုတျထဲက လှိုကျကနဲနဲ့ ယားသှားပွီး စောကျရညျလေးတှေ စိမျ့ထှကျလာပါတယျ။ဒီလိုပွောလို့ ကြှနျမကို ယှ လှနျးတယျလို့ပွောရငျတော့ မိနျးကလေးတိုငျး ဒီလိုပဲလို့ ပွောရမှာပါပဲ။ဟုတျတယျလေ မိနျးကလေးတှကေ ယောကျြားလေးရဲ့ လီးတှကေို တှေးပွီး အာသာဖွတေကျကွတာက ထုံးစံပဲလေ။ကြှနျမလဲ မိနျးကလေးပဲဆိုတော့ ရညျးစားမထားဖူးပမေဲ့ တဈကိုယျရညျ အာသာတော့ နစေ့ဉျလိုလို ဖွဖြေောကျမိတာပေါ့။ကိုကွီးလဲ ပွောကျသှားရော ကြှနျမလဲ အခနျးထဲကို ဝငျပွီး ကုတငျပျေါကို ပကျလကျလေးလှနျပွီး အဖုတျလေးကို ပှတျနမေိပါတော့တယျ။စိတျထဲမှာတော့ စောစောက မွငျလိုကျရတဲ့ ပုဆိုးအောကျကထောငျထနတေဲ့ ကိုကွီးရဲ့ လီးကွီးကို မွငျယောငျနတောပေါ့။ကိုကွီးရဲ့ လီးကွီးကို မွငျယောငျရငျး ကြှနျမလဲ လကျညှိုးလေးကို အဖုတျထဲကို သှငျးလိုကျပါတယျ။အရမျးကောငျးတာပါပဲရှငျ။တကယျ့လီးအစဈမဟုတျပဲ စိတျမှနျးနဲ့ လုပျတာတောငျ ဒီလောကျကောငျးနရေငျ ကိုကွီးရဲ့လီးကွီးနဲ့မြား အလိုးခံလိုကျရရငျတော့ ဘယျလောကျမြားကောငျးလိုကျမလဲ လို့ တှေးနမေိပါတယျ။အဲဒီညနကေတော့ ကြှနျမလဲ ကိုကွီးလီးကွီးကို မှနျးပွီး လကျနဲ့လုပျလိုကျတာ စောကျရညျတှကေို တအားထှကျပွီး တဈကိုယျလုံး မောသှားတာပဲရှငျ။
နောကျနမေ့နကျရောကျတော့ ကြှနျမရဲ့ စိတျတှကေ ကိုကွီးအပျေါကို အရငျကလို မောငျနှမ တဈဝမျးကှဲဆိုတဲ့ အမွငျမရှိတော့ပါဘူး။မွငျလို့လဲမရတော့ဘူး။ကြှနျမ ကိုကွီးကိုခဈြမိသှားပွီလေ ကိုကွီးရဲ့ ခဈြသူလေးလုပျပွီး ကိုကွီးနမျးတာကို ခံခငျြလာတယျ။ကိုကွီးရဲ့ လီးကွီးကိုလဲ ကိုငျကွညျ့ခငျြလာတယျ ကြှနျမနို့လေးတှကေိုလဲ ကိုကွီးကို ကိုငျစခေငျြလာတယျ အဖုတျလေးကိုလဲ ကိုကွီးကို ယကျခိုငျးခငျြလာတယျ ကိုကွီးရယျ ကြှနျမကို ကိုကွီးလုပျခငျြသလိုသာ လုပျပါတော့လို့ တှေးမိနပေါတော့တယျ။ ကြှနျမရဲ့ အဖုတျလေးကလဲ ကိုကွီးကိုမွငျတိုငျး ယှတကျနပွေီး အရညျလေးတှကေလဲ စိုရှဲနတောပါပဲရှငျ။စိတျတှကေ မနနေိုငျလှနျးလာတော့ ကြှနျမလဲ ကိုကွီးကို မိနျးမတို့တကျအပျတဲ့ ပညာတှသေုံးလိုကျတော့တာပေါ့။မိသားစုနှဈခုလုံးက ရခြေိုးတဲ့နရောက အတူတူပဲဆိုတော့ နလေ့ညျရောကျတော့ ကြှနျမရခြေိုးဖို့ ရကေနျရှိရာကို သှားလိုကျပါတယျ။ရခြေိုးတဲ့နရောက ကိုကွီးအခနျးကနကွေညျ့ရငျ ထကျအောကျတနျးနတောမို့ ကြှနျမလဲ သီခငျြးလေးဆိုနလေိုကျရငျး မကျြလုံးလေးနဲ့ ကိုကွီးအခနျးရှိရာကို မသိမသာလေးကွညျ့လိုကျပါတယျ။ကိုကွီးလေ ကြှနျမရခြေိုးဖို့ ပွငျတာကို ကွညျ့နတောတှရေ့တော့ ကြှနျမလဲ ရငျရှားထားတဲ့ ထဘီလေးကို အောကျနဲနဲ လြှောခပြွီး ပွငျဝတျလိုကျရငျး နို့တှကေို ပွလိုကျပါတယျ။ကိုကွီးရှိရာကို လှမျးမကွညျ့တော့ပမေဲ့ ကွညျ့နမေယျဆိုတာ သိတယျလေ။ကြှနျမလဲ ကိုကွီးကို အမြိုးမြိုး လုပျပွနရေငျး အခုနဆေို ငါ့ကိုကွညျ့ပွီး ကိုကွီးလီးကွီးက တောငျနမှောပဲ လို့ တှေးမိတော့ ကြှနျမအဖုတျလဲ စောကျရညျလေးတှေ စိမျ့ထှကျလာတာပေါ့ရှငျ။လကျညှိုးလေးကို ကိုကွီးလီးအမှတျနဲ့ အဖုတျထဲကို ထိုးသှငျးခငျြပမေဲ့ ကိုကွီးကွညျ့နတောဆိုတော့ အဲလောကျထိတော့ ကြှနျမ မရဲဘူးဖွဈနတေယျ။
ရခြေိုးပွီးလို့ ပွနျလာတော့ ကိုကွီးက အိမျပျေါကနေ ဆငျးလာတာကို တှလေို့ကျရတော့ ကြှနျမလဲ စိတျထဲကနေ ပွုံးလိုကျမိပါတယျ။ကြှနျမပွတာတှကွေညျ့ပွီး လီးကွီးတောငျနလေို့ ကြှနျမဆီလာတာဆိုတာ သိတာပေါ့ အဲဒါကွောငျ့လဲ ကြှနျမကနပေဲ ကိုကွီးကို စကားစပွောလိုကျပါတယျ။ “ကိုကွီး ရမေခြိုးသေးဘူးလား မခြိုးသေးရငျ ညီမလေးအခနျးထဲက အဝတျတနျး ပွုကျကနြလေို့ ရိုကျပေးဦးနျော” “အေး အေး ရိုကျပေးမယျလေ အခုလားမိစိမျး” ဟုတျကိုကွီး လို့ ကြှနျမလဲပွောပွီး ရှကေ့နထှေကျလာခဲ့ပါတယျ။ရစေိုနလေို့ ထဘီလေးက ကိုယျလုံးလေးမှာ ကပျနပွေီး ဖငျလေးပျေါလဲ ကပျနမေယျဆိုတာ သိလို့ ကိုကွီးကွညျ့ရအောငျ ကြှနျမက ရှကေ့နေ သှားပွလိုကျတာပါ။ရစေိုထဘီလေးက ဖငျအကှဲကွောငျးလေးပျေါအောငျကို ကပျနမှောဆိုတော့ ကိုကွီးကွညျ့ပွီး စိတျတှေ ထနမှောသခွောပါတယျ။အခနျးထဲရောကျတော့ ကြှနျမလဲ ရမေခြိုးခငျက ကွိုတငျပွီး ဖွုတျထားတဲ့ အဝတျတနျးကို ကိုကွီးကို ရိုကျခိုငျးလိုကျပါတယျ။အဝတျတနျးရိုကျနရေငျး ကိုကွီးက ကြှနျမကိုမသိမသာကွညျ့နတောကို မသိသလိုပဲနပွေီး ထဘီလဲလိုကျပါတယျ။ထဘီလဲပွီးတော့ အတှငျးခံဘောငျးဘီလေး တဈထညျကို ကိုကွီးရှမှေ့ာပဲ ယူပွီး ဖွနျ့ကွညျ့လိုကျရငျး ကိုကွီးကို ဖကျြကနဲ ကွညျ့လိုကျတော့ ကိုကွီးလေ ကြှနျမ အတှငျးခံဘောငျးဘီလေးကို စိုကျနတော တှလေို့ကျရပါတယျ။ကြှနျမလဲ ကိုကွီးက အတှငျးခံဘောငျးဘီလေးတှကေို ကွိုကျတဲ့စိတျရှိလို့နမေယျဆိုပွီး ကိုကွီးကို ပွောလိုကျပါတယျ။
“ကိုကွီး ဒီအရောငျလေး လှလားဟငျ ညီမလေးက ပနျးရောငျထကျ အသားရောငျပိုကွိုကျတာ” “လှပါတယျ ပနျးရောငျက မိစိမျးနဲ့ဆို ပိုလိုကျတယျ အရမျးလှမှာပဲ “ “ဟုတျလား ညီမလေးက ပနျးရောငျနဲ့ မလိုကျဘူးထငျနတော အဲဒါဆိုရငျ မနကျဖနျကွရငျ ဈေးသှားဝယျမယျ ကိုကွီးလိုကျပို့နျော” “အေးပါ လိုကျပို့မယျမိစိမျး ကိုကွီးလဲ ဝယျစရာလေးရှိလို့” စကားပွောနကွေရငျး ကြှနျမလဲ ကိုကွီးကို ကြောလေးပေးပွီး ထဘီလေးကို ပါးစပျကနကေိုကျပွီး ခွထေောကျကနေ ဘောငျးဘီလေးကို ဝတျလိုကျပါတယျ။အပျေါဆှဲတငျပွီးတော့ ကိုကွီးကိုကွညျ့လိုကျတော့ ပေါငျကွားက လီးကွီးက ထိုးထောငျပွီးထှကျနတောကို တှလေို့ကျရပါတယျ။ကိုကွီးရယျ…ညီမလေးလေ ကိုကွီးလီးကွီးကို မွငျရရငျ မနနေိုငျအောငျပါပဲရှငျ အဲဒီလီးကွီးကို ညီမလေးစုပျခငျြလိုကျတာလို့ စိတျထဲကနေ ပွောနမေိပါတော့တယျ။ နောကျနမေ့နကျရောကျတော့ ကြှနျမလဲ ကိုကွီးကိုချေါပွီး ဈေးကိုသှားလိုကျပါတယျ။ဆိုငျကယျပျေါမှာ ကိုကွီးခါးကို တငျးနအေောငျဖကျရငျး လိုကျသှားတာပေါ့။လမျးကမကောငျးလို့ ဂြိုကျထဲဆိုငျကယျက ကသြှားလို့ ခုနျသှားရငျ ကြှနျမလဲ နို့လေးတှနေဲ့ ကိုကွီးကြောကို မသိမသာလေး ပှတျနလေိုကျပါတယျ။ရငျလေးတှခေုနျနရေငျး ဈေးကိုဘယျလိုရောကျသှားတယျဆိုတာကို မသိအောငျပါပဲရှငျ။ဈေးရောကျမှပဲ သတိဝငျလာပွီး ဝယျမဲ့ဆိုငျကို ကိုကွီးနဲ့အတူတူ လာလိုကျကွပါတယျ။ကိုကွီးက ကြှနျမလကျလေးကို ကိုငျလိုကျတော့ ကြှနျမလဲ အလိုကျသငျ့ပဲ ပွနျကိုငျထားလိုကျပါတယျ။စိတျထဲကတော့ ကိုကွီးနဲ့မြားခဈြသူတှဖွေဈသှားကွရငျ အခုလိုပဲ လကျခငျြးတှဲပွီး လြောကျလညျပဈလိုကျမယျလို့ စိတျကူးနလေိုကျပါတယျ။ဝယျမဲ့ဆိုငျတော့ အတှငျးခံ ၃ထညျဝယျလိုကျပါတယျ။ကိုကွီးကွိုကျတဲ့ ပနျးရောငျလေးက ၂ထညျ ကြှနျမကွိုကျတဲ့ အသားရောငျလေးက ၁ တညျပေါ့။အိမျပွနျမလာခငျ ကိုကွီးနဲ့ ရခေဲမုနျ့ဝငျစားကွရငျး ကိုကွီးက သူ့ထဲက အသီးလေးတှကေို ကြှနျမထဲကို ထဲ့ပေးတော့လဲ ကွညျနူးလိုကျတာရှငျ။ကိုကွီးလဲ ငါ့ကို ခဈြနတောပဲ လို့ တှေးရငျး ရငျထဲမှာ တဈသိမျ့သိမျ့နဲ့ ခုနျနရေပါတယျ။ပွနျလာတဲ့ အခါမှာတော့ အသှားတုနျးကထကျပိုပွီး ကိုကွီးကို ဖကျထားလိုကျပါတယျ ကိုကွီးဆီကရတဲ့ ယောကျြားရနံ့ကလဲ ကြှနျမစိတျတှကေို ယဈမူးနအေောငျ ပွုစားနတောပေါ့။
နောကျရကျတှမှောတော့ ကြှနျမနဲ့ကိုကွီးရဲ့ ရငျးနှီးမှုက အရငျလိုမဟုတျတော့ပါဘူး။ကိုကွီး ကြှနျမကို ကွညျ့တဲ့အကွညျ့တှကေ ဘာဆိုတာ ကြှနျမသိသလို ကြှနျမကွညျ့တဲ့ အကွညျ့တှကေိုလဲ ကိုကွီးက နားလညျသိရှိနပေါပီ။မကွာခဏလဲ မကျြလုံးခငျြးစုံပွီးကွညျ့ကွပါတယျ။ကွညျ့တိုငျးလဲ တျောတျောနဲ့ အကွညျ့ခငျြးမခှာကွပါဘူး။ကွာလာတော့ တဈယောကျရငျထဲကို တဈယောကျကဝငျကွညျ့သလို နားလညျနပေါပွီ။ဒါပမေဲ့လဲ မောငျနှမတဈဝမျးကှဲဆိုတဲ့ အသိက ကြှနျမတို့ကွားမှာ ကာဆီးထားလို့နပေါတယျ။ကိုကွီးကတော့ အကွီးဆိုတော့ သူက စ ရငျ သူ့အပဈဖွဈနမှောစိုးလို့ မစရဲတာနမှောလို့ ကြှနျမတှေးမိတော့ ကြှနျမကပဲ စ ဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပါတော့တယျ။ ကြှနျမက စ ဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတာနဲ့ အစီစဉျဆှဲလိုကျပါတယျ။ဘယျလို စ မလဲပေါ့ နောကျဆုံးတော့ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ အိနျဒရလေဲ မပကျြအောငျ ကိုကွီးလဲ သိအောငျဆိုပွီး ကိုကွီးကွိုကျတဲ့ အတှငျးခံဘောငျးဘီပနျးရောငျလေးကိုဝတျပွီး ကိုကွီးရှမှေ့ာ ထဘီလေးကို မသိမသာလေး လြောခပြွီး ဝတျပွလိုကျပါတယျ။ကြှနျမရဲ့အဖုတျက တခွားမိနျးကလေးတှထေကျ ပိုပွီးဖောငျးနတေော့ အတှငျးခံလေးပျေါကနကွေညျ့ရငျ ဖောငျးဖောငျးလေးဖွဈနပေါတယျ။အဲဒါကို ကိုကွီးမွငျအောငျ ပွခငျြတာဆိုတော့ ထဘီလေးကို ခပျကွာကွာလေး အခြိနျဆှဲပွီး မကျြနာလေးကိုဘေးလှဲပွီး ဝတျပွလိုကျပါတယျ။ထဘီလေးကိုလဲ အောကျကို အတျောလေးလြောခပြွီးဝတျပွလိုကျပါတယျ။
ဒါမှ ကိုကွီးက ကြှနျမ အဖုတျဖောငျးဖောငျးလေးကို မွငျရမှာလေ။အဲလိုဝတျပွရငျး ကြှနျမစိတျတှကေ အရမျးကို လှုပျရှားနတောပေါ့။ကိုကွီးကွညျ့ရအောငျပွနရေတော့ ပွတဲ့ ကြှနျမရော ရငျတှအေရမျးခုနျနပွေီး စောကျရညျတှစေိမျ့ထှကျနရေတာပေါ့။ကိုကွီးလီးကွီးကလဲ တအားကိုတောငျနတောပဲရှငျ ပုဆိုးထဲကကို ထိုးထှကျနတောပဲ။အဲလို ပွပွီးတိုငျး ကြှနျမလဲ အခနျးထဲကို ပွေးရပါတယျ။မနနေိုငျတော့လောကျအောငျကို အဖုတျက ယားပွီး ယှနလေို့လေ အဲလိုအခြိနျမှာ ကိုကွီးလီးကွီးကို မွငျယောငျပွီး လကျညှိုးနဲ့ထိုးရတာက အရမျးကောငျးတာပဲရှငျ လကျညှိုးကို ကိုကွီးလီးအမှတျနဲ့ထိုးနရေငျး တခါတလမြေားဆိုရငျ အားမရလို့ လကျခလညျနဲ့ တအားစောငျ့ထိုးနမေိတာပေါ့။စိတျထဲကတော့ ကိုကွီးလီးကွီးနဲ့ အလိုးခံနတေယျလို့ မှနျးပွီးလုပျနတောပေါ့ရှငျ။ခံစားရတဲ့ အရသာကတော့ ပွောမပွတကျအောငျကိုပါပဲ စောကျရညျတှမြေားဆိုရငျ ရှဲနတောပဲ။ပွီးသှားလို့ ထှကျလာတဲ့ စောကျရညျတှကေို ကိုကွီးကွိုကျတဲ့ ပနျးရောငျအတှငျးခံလေးနဲ့ သုတျလိုကျရငျး စောကျရညျတှစေိုနတေဲ့ အတှငျးခံလေးကို ကိုကွီးမွငျအောငျ ပွခငျြလာပါတယျ။ဒါနဲ့ပဲ ကြှနျမလဲ ရေးခြိုးမလို လုပျပွီး အတှငျးခံလေးကို ရကေနျမှာ ခထြားလိုကျပွီး တခုခုမေ့ သလိုမြိုး အခနျးကိုပွနျလာလိုကျပါတယျ။ပွနျမလာခငျတော့ ကိုကွီးကို စကားလှမျးပွောလိုကျပါတယျ။အခနျးထဲရောကျမှ အပေါကျကနေ ခြောငျးကွညျ့နလေိုကျတော့ ခဏနတေော့ ကိုကွီးက ဆငျးလာပွီး မရဲတရဲနဲ့ ကြှနျမခထြားတဲ့ စောကျရညျတှေ စိုရှဲနတေဲ့ အတှငျးခံဘောငျးဘီကို ကိုငျကွညျ့နတော တှလေို့ကျရပါတယျ။
ကိုငျကွညျ့နရေငျး ကိုကွီးက အတှငျးခံလေးကို ဖွနျ့ကွညျ့ပွီးနမျးလိုကျပါတယျ။ပွီးတော့ ကြှနိမပွီးသှားလို့ ထှကျထားတဲ့ စောကျရညျတှကေို လြှာနဲ့ယကျနတောကို တှလေို့ကျရပါတယျ။ကြှနျမလေ ကိုကွီးက ကြှနျမစောကျရညျတှကေို ယကျနတောမွငျရတော့ စိတျထဲမှာ အရမျးကွနေပျမိတာပဲ အဖုတျလေးထဲကလဲ လှိုကျကနဲနဲ့ ယှတကျလာပါတယျ။ ကိုကွီးရယျ…ညီမလေး ကို အရမျးကိုခဈြလို့ စောကျရညျတှကေို ယကျနတောပေါ့နျော လို့ ပွောနမေိပါတယျ။ကိုကွီး ယကျခငျြတဲ့ စောကျရညျတှကေို ညီမလေး ပေးယကျပါ့မယျ ညီမလေးအဖုတျကို ကိုကွီးယကျပေးပါတော့ ထှကျလာတဲ့ စောကျရညျတှကေို ကိုကွီးစိတျကွိုကျယကျနပေါလို့ စိတျထဲကနေ ပွောနမေိပါတော့တယျရှငျ။ အခြိနျတှတေဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကုနျလာတာနဲ့အမြှ ကိုကွီးနဲ့ကြှနျမနဲ့က မောငျနှမတဈဝမျးကှဲလဲမက ခဈြသူတှလေဲမကြ ဖွဈနကွေပါပွီ။ကိုကွီးက ကြှနျမခါးလေးကိုဖကျလာရငျ ကြှနျမက ကွညျကွညျဖွူဖွူနဲ့ အဖကျခံသလို ပါးလေးကို နမျးရငျလဲ ပွုံးပွီးတော့ အနမျးခံနလေိုကျပါတယျ။တခါတလကွေရငျလဲ ဂါဝနျလေးဝတျပွီး ကိုကွီးရှမှေ့ာ ကုနျးပွလိုကျပါတယျ။ဂါဝနျလေးကပါးတော့ ကိုကွီးကွညျ့ရငျ အောကျက အတှငျးခံအရာလေးနဲ့ အတှငျးခံလေးကို ကိုကွီးမွငျနရေမယျဆိုတာသိတော့ ဂါဝနျပါးပါးလေးတှဝေတျပွီး ကိုကွီးရှိရာကို မယောငျမလညျလုပျနလေိုကျပါတယျ။အဲလိုအခါမြိုးဆိုရငျ ကိုကွီးက ကြှနျမဖငျလေးကို ကွညျ့နတေော့တာပါပဲ။ကြှနျမကလဲ ကိုကွီးကို ကွညျ့စခေငျြတာဆိုတော့ ကိုကွီးရှမှေ့ာပဲ မကျြနှာလေးကို ဘေးလှဲပွီး ဂါဝနျလေးကို ဒူးလေးပျေါအောငျ မ တငျလိုကျ ကုနျးလိုကျ လုပျပွနလေိုကျတာပေါ့။ကိုကွီးက ကြှနျမအဖုတျလေးရှိတဲ့ ပေါငျကွားနရောလေးကိုလဲ ကွညျ့နလေရှေိ့ပါတယျ။
အဲလို ကိုကွီးကကွညျ့နပွေီဆိုရငျ ကြှနျလဲ ယားလို့ကုပျတာလိုလိုနဲ့ ပေါငျလေးကို ပှတျလိုကျ ပေါငျကွားက အဖုတျလေးကို ပှတျလိုကျနဲ့ လုပျပွနလေိုကျပါတယျ။မကျြနာလေးကတော့ ဘေးကိုလှဲထားတာပေါ့။တခကျြခကျြ မကျြလုံးကိုထောငျ့ကပျပွီး ကွညျ့လိုကျရငျတော့ ကြှနျမလုပျပွတာတှကေို ကိုကွီးတဈယောကျ ကွညျ့နတေယျ လီးကွီးတောငျနတေယျဆိုတာတော့ သိရပါတယျ။ကြှနျမက တဈဝမျးကှဲအကိုကွီးကို ဒီလိုတှလေုပျပွနတောက ကိုကွီးကို ယုံလို့လေ။ကိုကွီးက ကြှနျမကို ထိခိုကျနဈနာအောငျ မလုပျဘူးဆိုတာသိနလေို့လေ။တဈဝမျးကှဲညီမဖွဈတဲ့ ကြှနျမကို ညီမလေးလိုရော ခဈြသူတဈယောကျလိုရော ခဈြနတေယျဆိုတာ သိနလေို့ စိတျခယြုံကွညျပွီး လုပျပွနတောပါ။ကြှနျမနဲ့ကိုကွီးက မောငျနှမတဈဝမျးကှဲတျောတော့ ကြှနျမက ဘာမလုပျနဲ့ ညာမလုပျနဲ့ဆိုရငျ မလုပျပဲနမေဲ့ အကိုကွီးဆိုတာ သိနတေော့ ကြှနျမလဲ စိတျထဲရှိတဲ့အတိုငျး အဖုတျလေး ယှရငျ ယှသလို ထငျတိုငျး လုပျပွနတောပေါ့။ဟုတျတယျလေ တဈစိမျးရညျးစားကမှ အတငျးဖကျပွီး အတငျးလိုးနဦေးမှာ။ကိုကွီးက အဲလို ဘယျတော့မှမလုပျဘူးဆိုတာ မောငျနှမဝမျးကှဲအသိနဲ့ သိနတောပေါ့။အဲဒါကွောငျ့ပဲ ကြှနျမလဲ စိတျရှိတိုငျး အဖုတျလေးယားတိုငျး လုပျပွနလေိုကျတာ တဈနကွေ့တော့ အိမျမှာ လူတှမေရှိတုနျး ကိုကွီးရောကျလာပါတယျ။ရောကျလာတော့ ခါတိုငျးလိုပဲ ပါးလေးကို နမျးမယျလုပျတော့ ပါးကိုနမျးတာမဟုတျပဲ နှုတျခမျးလေးကို အနမျးခံခငျြနတေဲ့ကြှနျမက မကျြနာလေးကို မော့ထားပွီး မကျြလုံးလေးမှိတျပေးလိုကျပါတယျ။နှုတျခမျးလေးတှတေော့ ခပျဟဟလေး လုပျပေးထားလိုကျပါတယျ။
ကြှနျမဆန်ဒကိုသိတဲ့ ကိုကွီးကလဲ အခြိနျမဆိုငျးပါဘူး သူ့ရဲ့နှုတျခမျးတှနေဲ့ ကြှနျမကို နမျးလာပါတယျ။အပျေါနှုတျခမျးလေးကို စုကျလိုကျတော့ ကြှနျမလဲ အလိုကျသငျ့ပဲ ကိုကွီးရဲ့ အောကျ နှုတျခမျးကိုစုပျလိုကျပါတယျ ပွီးတော့ ကြှနျမရဲ့ နှုတျခမျးနှဈလှာထဲကို ကိုကွီးရဲ့ လြှာက တိုးဝငျလာပါတယျ ဝငျလာတဲ့ လြှာနဲ့ ကြှနျမရဲ့လြှာလေးနဲ့ ထိတှလေို့ကျမိပွီဆိုရငျပဲ ခံစားလိုကျရတဲ့ အရသာက ပွောမပွတကျလောကျအောငျကို ကောငျးပါတယျ။တကိုယျလုံးကို သိမျ့သိမျ့တုနျနအေောငျကို ခံစားနရေပါတယျ လထေဲမှာလှငျ့မြောနသေလိုပါပဲ။ခံစားနရေတဲ့ အရသာတှကေိုတိုးပွီး ခံစားခငျြတာကွောငျ့ ကြှနျမရဲ့လြှာလေးကို ကိုကွီးရဲ့လြှာနဲ့ ပွနျပွီး ထိုးပှတျနမေိပါတယျ။လြှာခငျြး ထိတှနေ့ရေတဲ့ အရသာက အရမျးကောငျးလှနျးလို့ ဘာကိုမှသတိမရတော့ပါဘူး ကြှနျမသိတာက ကိုကွီးလြှာနဲ့ ကြှနျမလြှာ ထိတှပွေီ့းစုပျနရေဖို့ပါပဲ။ကိုကွီးရဲ့ အနမျးတှကွေောငျ့ မူးယဈရီဝနေတေုနျး ကြှနျမနို့တှကေို ကိုကွီးက အကျြီပျေါကနေ ကိုငျလာပါတယျ။ပွီးတော့ အကျြီလေးအောကျကိုဝငျလာပွီး ဘျောလီ လေးအောကျကို ဝငျလာဖို့ ကွိုးစားနပေါတယျ။ကြှနျမလဲ ကိုကွီးကို ခဈြတဲ့စိတျတှရေော အဖုတျလေးထဲက တဈယှယှဖွဈလာတာရောကွောငျ့ အကျြီကိုရော ဘျောလီလေးကိုပါ လှနျပေးလိုကျပါတယျ။နို့လေးတှပေျေါလာတာနဲ့ ကိုကွီးက ကြှနျမနို့တှကေို လကျနဲ့ဆုပျနယျပါတော့တယျ။နို့သီးလေးတှကေိုခရြေငျး နို့လေးတဈလုံး ဆှဲစို့လိုကျပါတယျ။နို့လေးတဈဖကျကို အစို့ခံရငျး တဈဖကျကနို့သီးလေးကို အခခြေံနရေတာကအရမျးကောငျးတာပဲရှငျ။ခဏနတေော့ ကိုကွီးလကျတှကေ ကြှနျမရဲ့ ထဘီလေးကို ဖွပွေီး အတှငျးခံလေးထဲကို ဝငျလာပါတယျ။ကိုကွီး လုပျပေးတာတှကွေောငျ့အရမျးကို စိတျတှထေနတေဲ့ ကြှနျမအဖုတျက စောကျရညျကွညျတှထှေကျနပေါတယျ။
စောကျရညျတှစေိုအိနတေဲ့ အဖုတျကို ကိုကွီးက ကိုငျပှတျပွီး စောကျစိလေးကို ဆှပေးတော့ အရမျးကို ကောငျးလိုကျတာရှငျ။မကွာဘူး ကိုကွီးလကျညှိုးက အဖုတျထဲကို ဝငျလာပါတယျ စောကျရညျကွညျတှေ ထှကျနတောဆိုတော့ လကျညှိုးက အသာပဲ ဝငျသှားပါတယျ ဝငျသှားပွီးတာနဲ့ ပွနျထုကျ ပွနျသှငျး လုပျပေးနတေော့ ကောငျးလှနျးလို့ ကြှနျမတဈကိုယျလုံး အားမရှိတော့လို့ ကိုကွီးရငျခှငျထဲကို လှခလြိုကျရပါတယျ။ကိုကွီးကတော့ ကြှနျမထဘီလေးကို လှနျတငျပွီး အတှငျးခံထဲကနေ လုပျနရေတာ အားမရလို့ ဘောငျးဘီလေးကို ဆှဲခြှပျလိုကျပါတယျ။ကြှနျမလဲ ကိုကွီးလုပျသမြှကို အလိုကျသငျ့လေးနပေေးရငျး ပေါငျလေးတှကေို ကားပေးထားလိုကျပါတယျ။ကိုကွီးက ကြှနျမကို အောကျမှာလှဲခိုငျးပွီး ပေါငျကွားထဲကို ဝငျလိုကျပါတယျ။ကြှနျမသိလိုကျပါပီ ကိုကွီးက ကြှနျမ အဖုတျကို ယကျပေးတော့မယျဆိုတာ။အဖုတျက မနနေိုငျတော့လောကျကို ယားနေ ယှနပေမေဲ့ အကိုတဈဝမျးကှဲကို စောကျရညျတှစေိုရှဲနတေဲ့ အဖုတျကိုယကျမှာတော့ အားနာမိပါတယျ။ဒါပမေဲ့လဲ အဲလိုအောကျမနေ့တေုနျး ပေါငျကွားကို ကိုကွီးခေါငျးက ရောကျလာပွီး လြှာလေးနဲ့ အဖုတျအကှဲကွောငျးလေးကို ယကျလိုကျတဲ့ အခါမှာတော့ ကြှနျမဖငျလေး ကော့တကျသှားပွီး မကျြလုံးလေးတှမှေိတျကသြှားတော့တယျ။ကိုကွီးလြှာလေးက ပေးတဲ့အရသာတှကေ ကောငျးလှနျးတော့ ခံစားနရေတဲ့ အရသာပျေါမှာပဲ စိတျကရောကျသှားတယျ။ကောငျးလှနျးတဲ့ အရသာတှကွေောငျ့ ကြှနျမလဲ သတိလကျလှတျနဲ့ ကိုကွီးခေါငျးက ဆံပငျတှကေိုဆှဲပွီး အဖုတျနဲ့ တအားကပျထားခိုကျမိပါတယျ။အကှဲကွောငျးထိပျက စောကျစိလေးကို လြှာနဲ့ထိုးကျောပွီး ယကျလိုကျရငျ ဖငျလေးကော့တကျသှားရပါတယျ။စောကျစိလေးကို ယကျနရေငျး လကျနဲ့ အဖုတျထဲကို ထိုးပေးနတေော့ တဈကိုယျလုံးကို ကော့ပွနျနအေောငျကို ကောငျးတာပါပဲရှငျေ။ကိုကွီးရဲ့ လြှာနဲ့ယကျပေးနတောရော လကျနဲ့ထိုးပေးနတောတှရေောကွောငျ့ ကြှနျမလဲ ကိုကွီးဆံပငျတှကေိုပဲ အတငျးဆှဲပွီး ယကျပေးဖို့ ပွောနမေိပါတော့တယျ။
အားးကောငျးလိုကျတာ ကိုကွီးရယျ ယကျယကျ ညီမလေးအဖုတျကို တအားယကျပေး အစိလေးရော စုပျပေး အားးးကောငျးတယျ ညီမလေးမနနေိုငျတော့ဘူး အဖုတျထဲက တအားကောငျးနပေီ ပီးတော့မယျ ညီမလေးပီးတော့ ကိုကွီးးးးအားးးး ကြှနျမလဲ အဖုတျထဲက အရမျးကောငျးတဲ့ခံစားမှုတှကွေောငျ့ ကိုကွီးကိုပဲ တစာစာနဲ့ တောငျးဆိုမိနတေော့တယျ။ခဏနတေော့ တဈကိုယျလုံး လထေဲလှငျ့မြောသှားသလိုခံစားလိုကျရပွီး အဖုတျထဲကနေ စောကျရညျတှေ ထှကျကုနျပါတယျ။ အားးးကိုကွီးးးးအားးး ညီမလေးးးကောငျးးးလိုကျ…တာ…အားးးကိုကွီးရေ အားးးညီမလေးပွီးပီကိုကွီးရဲ့ အောငျမလေးးးကောငျးလိုကျတာကိုကွီးရယျ ညီမလေးအဖုတျထဲက ကောငျးလိုကျတာ ဟငျးးးးး စောကျရညျတှထှေကျပွီး ပွီးသှားတော့ ကြှနျမတဈကိုယျလုံးနှုံးသှားတာပဲရှငျ။ကိုကွီးကိုလဲ ခဈြသထကျခဈြသှားမိပါတယျ။ကြှနျမလဲ ကိုကွီးကို ကောငျးစခေငျြတာကွောငျ့ ပုဆိုးထဲကနေ ထောငျထနတေဲ့ လီးကွီးကို လှမျးကိုငျလိုကျပါတယျ။ကိုကွီးရဲ့ တောငျနတေဲ့လီးကွီးက အားရစရာကွီးပါရှငျ။ကြှနျမလဲ ကိုကွီးပုဆိုးကိုဆှဲခြှပျပွီး တောငျနတေဲ့ လီးကွီးကို နှုတျခမျးလေးတှနေဲ့ စုပျပေးလိုကျပါတယျ။
တဈခါမှလီးမစုပျဘူးပမေဲ့ ကိုကွီးကို ကောငျးစခေငျြတာကွောငျ့ လီးထိပျဖူးကွီးကို လြှာလေးနဲ့ယကျပေးရငျး ရခေဲခြောငျးစုပျသလို တဈပြှတျပြှတျနဲ့ စုပျနလေိုကျပါတယျ။ကိုကွီးကတော့ ကြှနျမနို့လေးတှကေို ကိုငျနပွေီး စုပျပေးတာကို ခံနပေါတယျ။ကြှနျမလဲ ကွားဖူး ဖကျဖူးထားတဲ့ ထဲကအတိုငျးကိုကွီးလီးကွီးကို အစှမျးကုနျပွုစုပေးနလေိုကျပါတယျ မကွာခငျမှာပဲ ကိုကွီးရဲ့ မသီမသအသံကို ကွားလိုကျရပွီး လီးကွီးထဲကနေ သုတျရညျတှေ ထောငျပနျးလာပါတယျ ကိုကွီးအပျေါကို ခဈြတဲ့စိတျတှကွေောငျ့ပဲ ထှကျလာသမြှလရညျတှကေိုမြိုခပြဈလိုကျပါတယျ။ဟုတျတယျလေ ကိုကွီးလဲ ကြှနျမအဖုတျထဲကနထှေကျတဲ့ စောကျရညျတှကေို ယကျပေးရငျးမွိုခသြေးတာပဲ ကြှနျမလဲကိုကွီး လရညျတှကေို မွိုခရြမှာပေါ့၊စိတျထဲမှာလဲ အရမျးပဲ ကွညျနူးပြျောရှငျနပေါတယျ၊ခဈြရတဲ့ ကိုကွီးနဲ့ အခုလို နရေတာက ကြှနျမအတှကျတော့ အလှနျကို ကနြေပျစရာဖွဈနပေါတယျ။ကိုကွီးရဲ့ ရငျခှငျထဲမှာ မှီနရေငျး ကိုကွီးဖကျထားတာကို ပွုံးပွုံးလေး နနေလေိုကျပါတယျ။အဲဒီနရေဲ့ နောကျရကျတှမှောတော့ ကိုကွီးနဲ့ကြှနျမအတှကျ တကယျ့ကိုသာယာတဲ့ နလေ့ေးတှပေါပဲ။
လူလဈတာနဲ့ ကိုကွီးကနမျးပွီး အဖုတျလေးကို ယကျပေးပါတယျ ကြှနျမကလဲ ကိုကွီးရဲ့လီးကွီးကို ပါးစပျလေးနဲ့မဆနျ့မပွဲစုပျပေးပါတယျ။ညရောကျရငျလဲ လူကွီးတှအေိပျတာနဲ့ ကြှနျမတို့က အိမျအောကျမှာ ခိုးတှကွေ့ပါတယျ။ညဆိုတော့ လှပျလပျတာကွောငျ့ ကြှနျမလဲ ထဘီလေးကိုခြှပျပွီး ကိုကွီးရဲ့မကျြနာပျေါကိုတကျထိုငျပွီး ကိုကွီးရဲ့မကျြနာကို ကြှနျမအဖုတျနဲ့ အားရပါးပှတျနလေိုကျပါတယျ။တခါတလကွေရငျလဲ ကိုကွီးက ကြှနျမကို ဖငျကုနျးခိုငျးပွီး အဖုတျကိုနောကျကနယေကျပေးပါတယျ။ဖငျလေးကိုဖွဲပွီး ဖငျပေါကျလေးကို ကိုကွီးကယကျပေးရငျမြား အရမျးကိုကောငျးတာပါပဲရှငျ။ဖငျပေါကျလေးကို အယကျခံနရေငျး အဖုတျလေးကို လကျနဲ့အလိုးခံနရေတာက အရမျးကိုကောငျးလှနျးလို့ ကြှနျမလဲ စောကျရညျတှအေိုငျထှနိးနအေောငျကို ထှကျပွီး ပွီးနရေပါတယျ။မောငျနှမဝမျးကှဲခငျြးဆိုတဲ့ အသိကလဲ ကြှနျမကိုပိုပွီး စိတျတှထေစပေါတယျ။ဟုတျတယျလေ ကိုယျ့အကိုဝမျးကှဲကို အဖုတျယကျခိုငျးတာ စောကျရညျတှတေိုကျရတာက ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ ခံစားမှုပါပဲရှငျ။ကိုကွီးရဲ့လီးကွီးကိုလဲ ခဈြလိုကျကို မပွောပါနဲ့တော့ရှငျ စုပျမ၀ ကိုငျမဝအောငျကို ဖွဈနရေပါတယျ။ကိုကွီးရဲ့ လီးကွီးကိုနတေို့ငျး ကိုငျနရေ စုပျနရေတော့ ကွာလာတော့ ကြှနျမအားမရတော့ပါဘူး အဲဒီလီးကွီးကို ကြှနျမအဖုတျထဲသှငျးပွီး အလိုးခံခငျြလာပါတယျ။လီးကွီးကကွီးတော့ အလိုးခံလိုကျရရငျ အရမျးကောငျးမှာပဲလို့ တှေးမိလာတော့ အလိုးခံခငျြလာတာပေါ့။ဒါနဲ့ ကိုကွီးကိုလိုးပေးဖို့ပွောတော့ ကိုကွီးကကြှနျမကို ဆေးကဒျလေးတဈကဒျပေးပါတယျ ဘာဆေးလဲမေးတော့ ဗိုကျမကွီးအောငျသောကျတဲ့ဆေးတဲ့လေ ကြှနျမလဲပြျောသှားတာပေါ့ ဆေးသောကျပွီးတဲ့ ညရောကျလာတော့ ကိုကွီးလိုးတာကို ခံရတော့မယျဆိုတာသိနတေော့ ကြှနျမလေ ရငျတှခေုနျလိုကျတာရှငျ။
ည ၁၁နာရီကြျောလောကျကတြော့ ကိုကွီးနဲ့တှနေ့ကွေနရောမှာတှကွေ့ပါတယျ။တှကွေ့တာနဲ့ ဖကျကွနမျးကွပေါ့ရှငျ။ကြှနျမနှုတျခမျးလေးတှကေို ကိုကွီးကစုပျပွီး ကြှနျမလြာလေးကိုလဲ ဆှဲစုပျနတောပေါ့ ပွောရဦးမယျ ယောကျြားတဈယောကျနဲ့ နမျးရတာက အငျမတနျမှကိုကောငျးလှနျးလှပါတယျ။နှုတျခမျးခငျြးတော့ပွီး လြှာခငျြးပှတျဆှဲနရေရငျ တဈကိုယျလုံးကို လထေဲမြောနသေလိုပါပဲ။တဈကိုယျလုံးကို သိမျ့သိမျ့တုနျနအေောငျကို ခံစားရတဲ့ အရသာတှကေ ကောငျးလှနျးတော့ အဲဒီအရသာကို လကျမလှတျခငျြလောကျပါပဲရှငျ။အနမျးခံနရေငျး နို့တှကေိုအကိုငျခံနရေတာကလဲ ဖီးတမြိုးပါပဲ။ကိုကွီးနဲ့ကြှနျမလဲ အဲဒီညက အဆုံးစှနျသောအရသာတှခေံစားကွဖို့အတှကျ အဝတျတှအေကုနျခြှပျလိုကျကွပါတယျ။ပွီးတာနဲ့ ကြှနျမလဲ ဒူးထောငျပွီးပေါငျတှကေို အစှမျးကုနျကားပေးလိုကျပါတယျ။ပေါငျတှကေားပေးလိုကျတော့ ကိုကွီးက ကြှနျမအဖုတျကို ယကျတော့တာပေါ့။စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားတှကေို ဖွဲပွီး စောကျစိလေးကို စုပျနတောမြား ကောငျးလိုကျတာရှငျ။အကှဲကွောငျးလေးကို လြှာနဲ့ယကျပေးလိုကျ အစိလေးကို စုပျလိုကျ လုပျနတေော့ စောကျရညျတှကေ တသှငျသှငျနဲ့ထှကျနရေပါတယျ။ကိုကွီးရဲ့ လြှာကွီးက ကြှနျမအဖုတျအကှဲကွောငျးလေးကို ပငျ့ယကျလိုကျရငျမြား ကြှနျမလေ ဖငျလေးကိုကွှတကျနတောပဲရှငျ။စောကျရညျတှလေဲ အကွိမျကွိမျကိုထှကျပွီး ပွီးနရေပါတယျ။ဒါပမေဲ့လဲ ကိုကွီးက ဆကျပွီး ယကျနတောကွောငျ့ ပွီးသှားပမေဲ့ ခံခငျြတဲ့စိတျကတော့ လြော့မသှားပါဘူး။နောကျဆုံးတော့ ကြှနျမကပဲ တျောပါတော့ ကိုကွီးရယျ ညီမလေးကို ကိုကွီးလီးကွီးနဲ့ လိုးပေးပါတော့လို့ ပွောလိုကျရပါတယျ။အဲဒီကွမှပဲ ကိုကွီးက ကြှနျမပေါငျကွားထဲကို ဝငျလာပါတယျ။ပီးတော့ ကြှနျမအဖုတျလေးကို ဖွဲပွီး လီးထိပျဖူးကွီးကို ကြှနျမတို့ မိနျးကလေးတှေ အလိုးခံတဲ့ အပေါကျဝလေးမှာ တလေို့ကျပါတယျ။လီးထိပျဖူးကွီး စောကျခေါငျး အ၀ လေးမှာ တလေ့ာတာနဲ့ ကြှနျမလဲ အံလေးကြိတျပွီး ကိုကွီးရဲ့လီးကွီး အဖုတျထဲဝငျလာမှာကို စောငျ့နလေိုကျပါမယျ။
ဟငျ့…ကိုကွီးလေ သူ့လီးကွီးကို မသှငျးသေးပဲ အကှဲကွောငျးထိပျက စောကျစိလေးကို ထိပျဖူးကွီးနဲ့ ထိုးဆှနပွေနျပါတယျ။ကြှနျမလဲ အလိုးခံခငျြစိတျက တအားမြားနတေော့ ကိုကွီးလီးကွီးကို ကြှနျမလကျလေးနဲ့ လှမျးကိုငျပွီး အဖုတျအဝမှာတပွေီ့း ဖငျလေးကို အောကျကနေ ကော့တငျလိုကျပါတယျ။ခံခငျြနတေဲ့စိတျတှကွေောငျ့ အဖုတျကနေ စောကျရညျတှကေ ထှကျနတေော့ ကော့လိုကျတာနဲ့ လီးထိပျဖူးကွီးက ဝငျသှားပါတယျ။ကိုကွီးက နတေို့ငျးလိုလို လကျနဲ့ထိုးနတောရော ကြှနျမကလဲ တဈကိုယျရညျ အာသာဖွလောတာ ကွာတာက တဈကွောငျးကွောငျ့ ကြှနျမအဖုတျက အပေါကျလေးက နဲနဲကယျြနပေါတယျ။အဲဒါကွောငျ့လဲ လီးထိပျဖူးကွီးက ဝငျသှားတာပါ။ကြှနျမက ဖငျလေးကော့ပွီး လီးကွီးကို သှငျးယူလိုကျတော့ ကိုကွီးကလဲ အလိုကျတသိနဲ့ လီးကွီးကို တဖွညျးဖွညျးနဲ့ သှငျးပေးပါတယျ။လီးကွီး ကြှနျမအဖုတျထဲ ဝငျလာလလေေ ကြှနျမဖငျလေးက ကော့တကျလေ ဖွဈနရေပါတယျ။ကိုကွီးကလီးကွီးကို ပွနျဆှဲထုတျလိုကျတော့လဲ အဖုတျအတှငျးသားနုနုလေးတှကေို ထိပျဖူးကွီးဘေးက ဒဈကွီးက ပှတျဆှဲသှားတော့ ကြှနျမရငျထဲက အူအသဲတှကေို ဆှဲထုတျလိုကျသလိုပါပဲရှငျ။အဲဒီနောကျမှာတော့ ကိုကွီးက သူ့လီးကွီးကို ဆော့ဆောငျ့ပွီး ကြှနျမအဖုတျကို လိုးပါတော့တယျ။ကောငျးလိုကျတာတော့ မပွောပါနဲ့တော့ရှငျ။အခုကြှနျမကိုလိုးနတောက ကြှနျမဒျေါကွီးရဲ့သား ကြှနျမအကိုတဈဝမျးကှဲဆိုတာ သိနရေတော့ စိတျတှကေလဲ အရမျးကို လှုပျရှားနရေပါတယျ။မောငျနှမဝမျးကှဲခငျြးလိုးနကွေတာဆိုတဲ့ အသိက ကြှနျမကိုပိုပွီး အလိုးခံခငျြစိတျတှဖွေဈနစေပေါတယျ။အလှနျမငျး တကျကွှနတေဲ့ စိတျတှကွေောငျ့ ကြှနျမလဲ ပေါငျတှကေိုအစှမျးကုနျကားပွီး ဖငျလေးကော့ပွီး အလိုးခံနလေိုကျပါတယျ။အပျေါကနေ ဆောငျ့လိုးနတေဲ့ ကိုကွီးကိုလဲ ဖကျထားရငျး လိုးပဖေို့ပဲ တောငျးဆိုမိနပေါတယျ။
“အား…ကိုကွီး လိုး လိုး ညီမလေးအဖုတျကို တအားလိုး အားးးညီမလေးကို မညှာနဲ့ ကိုကွီးရဲ့ညီမတဈဝမျးကှဲကို တအားလိုးပါ အားးး ကောငျးလိုကျတာကိုကွီးရယျ” “ကိုကွီးလဲ ကောငျးလိုကျတာကှာ မိစိမျးအဖုတျက တအားလိုးလို့ကောငျးတာပဲ မိစိမျးကို ကိုကွီးလိုးခငျြနတောကွာပွီ အခုမှပဲ လိုးရတော့တယျ” “လိုးပါကိုကွီးရယျ စိတျရှိသလောကျသာလိုးပဈလိုကျစမျးပါ ညီမလေးလဲ ကိုကွီးလိုးတာကို ခံခငျြနတော ကွာပါပီရှငျ” ကြှနျမက ပွောလိုကျတော့ ကိုကွီးလေ သူ့လီးကွီးကို ဆှဲထုတျပွီး ကြှနျမအဖုတျကို ဆောငျ့ဆောငျ့ပွီး လိုးပါတော့တယျ။အားရလိုကျတာကို မပွောပါနဲ့တော့ရှငျ။စောကျရညျတှကေလဲ အဖုတျထဲကနေ ပေါငျတှအေထိကို စီးကနြပေါတယျ။ကိုကွီးရဲ့ လီးကွီးနဲ့ အလိုးခံနတေဲ့အရသာတှကေ ကောငျးလှနျးတော့ ကြှနျမလဲ စိတျရှိသလိုကို အျောပွီး အလိုးခံနလေိုကျပါတယျ။ကိုကွီးရဲ့ ပွငျးထနျတဲ့လိုးဆောငျ့မှုတှကွေောငျ့ ကြှနျမအဖုတျထဲမှာ အီဆိမျ့နအေောငျကို ကောငျးနရေပါတယျ။မကွာခငျမှာပဲ ကြှနျမပွီးခငျြလာပါတယျ ဒါနဲ့ပဲ ကိုကွီးကို ပွောလိုကျမိပါတယျ။
“ကိုကွီး လိုး လိုး ညီမလေးပွီးတော့မယျ အားးးးကောငျးတယျကိုကွီးရေ…လိုးပါ ညီမလေးအဖုတျကို တအားလိုးပါ အားးးကိုကွီးးးးရေ….အားးးး” “ကိုကွီးလဲ ပီးတော့မယျမိစိမျး တူတူပီးကွမယျ မိစိမျးအဖုတျထဲကို ကိုကွီးရဲ့လီးရညျတှေ ပနျးထဲ့ပေးမယျ” “ဟုတျကိုကွီး လီးရညျတှပေနျးထဲ့ပေး အားးးကိုကွီးးးးညီမလေးပွီးတော့မယျ…အားးးကိုကွီးရေ ညီမလေးမရတော့ဘူး အဖုတျထဲက အရမျးကောငျးနပေီ အားးးကိုကွီးးးလီးကွီးနဲ့တအားလိုးပေးးးအားးးကောငျးလိုကျတာ အလိုးခံရတာ ကောငျးလိုကျတာ အားးးကိုကွီးရေ… ညီမလေးးးအားးးညီမလေးးးပီးတော့မယျ အားးးကိုကွီးရေ…အားးးညီမလေးပီးပီကိုကွီးရဲ့ အားးးကောငျးလိုကျတာ ကိုကွီးရယျ….” ကိုကွီးက သူ့လီးကွီးနဲ့ တအားဆောငျ့ပွီးလိုးပေးမှုကွောငျ့ ကြှနျမတဈကိုယျလုံးကို ကော့ပြံပွီး ပွီး သှားရပါတယျ။စောကျရညျတှကေလဲ ထှကျတာကို မပွောပါနဲ့တော့ရှငျ။အရငျက ကြှနျမဟာကြှနျမ လကျနဲ့လုပျတာနဲ့ ကိုကွီးရဲ့ လီးကွီးနဲ့ အလိုးခံရတာက ဘာမှကို မဆိုငျအောငျကို ကောငျးလှပါတယျရှငျ။အလိုးခံရလို့ပွီးသှားတဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့အရသာတှကေို ခံစားနစေဉျမှာပဲ ကိုကွီးရဲ့ လီးကွီးကနေ လီးရညျတှပေနျးထှကျလာပါတယျ။အလိုးခံရလို့ ကောငျးတဲ့အရသာတှကေို ခံစားနတေုနျးမှာပဲ အဖုတျထဲကို လီးရညျတှနေဲ့ အပနျးခံလိုကျရတော့ စောကျဖုတျထဲကိုနှေးသှားတာပဲရှငျ။ကိုကွီးရဲ့လီးကွီးနဲ့ အလိုးခံလိုကျရတဲ့နောကျပိုငျးမှာတော့ ကြှနျမလေ ကိုကွီးနဲ့မခှဲနိုငျအောငျကို ဖွဈသှားရပါတယျ။အခြိနျတိုငျးလိုလို ကိုကွီးလိုးတာကို ခံခငျြနပေါတယျ ကိုကွီးလီးကွီးကို အခြိနျပွညျ့ကိုငျနခေငျြပါတယျ။မာပွီး တောငျနတေဲ့ လီးကွီးကို စုပျနခေငျြပါတယျ။လီးဆိုတာကို လကျတှမေ့မွငျဖူးပမေဲ့ လိုငျးပျေါကအပုံတှထေဲမှာတော့ မွငျဖူးပါတယျ။ဒါပမေဲ့ အဲဒီမွငျဖူးတဲ့ လီးတှနေဲ့ ကိုကွီးလီးကွီးက ဘာမှကိုမဆိုငျပါဘူး။
ကိုကွီးလီးကွီးက အရမျးကွီးတာ ရညျလဲရှညျတယျ။ တုပျတုပျမာမာကွီး လီးဒဈကွီးကလဲ ဖူးထနတောပါပဲရှငျ။အစက အဲလောကျကွီးတဲ့ လီးကွီးကို ကြှနျမအဖုတျထဲ သှငျးလို့မရဘူးလို့ ထငျခဲ့တာ လကျတှအေ့လိုးခံကွညျ့လိုကျတော့မှ မဝငျဘူးဆိုတာ မရှိမှနျးသိသှားရပါတယျ။ကိုကွီးလီးကွီး ကြှနျမအဖုတျထဲကိုဝငျလာရငျ တငျးတငျးဆို့ဆို့ကွီးနဲ့ ဒဈကွီးက စောကျခေါငျးအတှငျးသားနုနုလေးတှကေို ပှတျဆှဲနတေော့ အရမျးခံလို့ကောငျးတာပါပဲ။အဲဒါကွောငျ့လဲ အမတေို့လဈတာနဲ ကြှနျမလဲ ကိုကွီးနဲ့လိုးခဲ့ပါတယျ။တခါတလမြေားဆိုရငျ အိမျကလူတှဘေေးမှာပဲ ကြှနျမကထိုငျးပွီး ကိုကွီးကို ထဘီအောကျစလှတျပွတာလေ။အမတေို့ကတော့ မသိဘူး မမွငျဘူးပေါ့ရှငျ။အဲလိုအခါမြိုးဆိုရငျ ကြှနျမအဖုတျကိုကွညျ့ပွီး ကိုကွီးလီးကွီးတောငျနမေယျဆိုတာ ကြှနျမသိတာပေါ့။လူတှကွေားမှာ ကိုကွီးကို အဖုတျလှနျပွရတာက စိတျထဲမှာအရမျးကို ဖီးကွှတာပဲ။တခါတလဆေို ကြှနျမက ထဘီအောကျစလှတျပွီး အဖုတျနှုတျခမျးသားလေးတှပေါ ဖွဲပွတာလေ အစိလေးလဲ ပှတျပွတာပဲ။အမတေို့ကတော့ ကြှနျမတို့ကို မောငျနှမတဈဝမျးတှပေဲဆိုပွီး သတိမထားမိကွဘူးလေ။ဒါပမေဲ့ အဲဒီမောငျနှတဈဝမျးကှဲက လိုးပွီးနကွေပွီဆိုတာတော့ မသိကွဘူးပေါ့ရှငျ။တခါတလကွေ ကြှနျမတှေးမိတယျ ရညျးစားထားပွီး အလိုးခံရငျတောငျ ကိုကွီးနဲ့အလိုးခံသလိုကောငျးမှာမဟုတျဘူးလို့လေ။ဘာလို့လဲဆိုရငျ ကိုကွီးနဲ့ကြှနျမမောငျနှမတဈဝမျးကှဲခငျြး လိုးနကွေတာဆိုတဲ့ အသိက ပိုပွီး စိတျလာစတောကွောငျ့ပါ။
မောငျနှမတဈဝမျးကှဲခငျြး လိုးနကွေတယျလို့ တှေးမိယုံနဲ့တငျ ကြှနျမအဖုတျထဲက လှိုကျလှိုကျပွီး ယားလာပါတယျ စောကျရညျတှေ ထှကျလာနရေပါတယျ။မောငျနှတဈဝမျးကှဲခငျြး လိုးရတဲ့အရသာက ကောငျးလှနျးတော့ ကြှနျမနဲ့ ကိုကွီးလဲ လူလဈတာနဲ့ လိုးကွတော့တာပေါ့။အခြိနျမရရငျတော့ ကြှနျမကကိုကွီးလီးကွီးကိုကိုငျပွီး ဂှငျးထုပေး ကိုကွီးက ကြှနျမအဖုတျကို လကျနဲ့လိုးပေး လုပျကွပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ကြှနျမက အဖုတျအယကျခံရတာကို ပိုကွိုကျတော့ လူလဈတာနဲ့ ထဘီကို မလှနျပွီး ကိုကွီးမကျြနာကို အဖုတျနဲ့ပှတျလရှေိ့ပါတယျ။ကိုကွီးကို အဖုတျယကျခိုငျးရငျ လှယျအောငျဆိုပွီး အတှငျးခံကိုတောငျ သိပျပွီးမဝတျတော့ပါဘူး။ဒါမှလဲ လူလဈတာနဲ့ ကိုကွီးကိုထိုငျခိုငျးပွီး ကြှနျမက ကိုကွီးမကျြနာကို အဖုတျနဲ့ပှတျလို့ရမှာလေ။ကြှနျမကထဘီလှနျ ပေါငျတှကေားပွီး ကိုကွီးမကျြနာပျေါကို အဖုတျတငျလိုကျပွီဆိုရငျ ကိုကွီးက သူ့လြှာကွီးကိုထုတျပွီး အဖုတျကို အောကျကနပေငျ့ပွီး ယကျပေးတာလေ။ပွီးသှားရငျ စောကျရညျတှကေ အရမျးထှကျတော့ ကိုကွီးပါးစပျထဲကို ဝငျကုနျတာပေါ့အရမျးကောငျးတာပါပဲရှငျ။ကိုကွီးမကျြနာဆိုရငျ ကြှနျမအဖုတျကထှတျတဲ့ စောကျရညျတှကေို ပပှေနတောပါပဲ။အဲလိုအခါမြိုးဆိုရငျ ကြှနျမသိပျပွီး ကနြေပျတာပဲ ကြှနျမထကျအသကျအမြားကွီးကွီးတဲ့ အကိုတဈဝမျးကှဲကို ကြှနျမအဖုတျထဲကထှကျတဲ့ စောကျရညျတှကေို တိုကျရတာက စိတျထဲမှာ ကွကျသီးဖွနျးဖွနျးထအောငျကို ခံစားရပါတယျ။ဒီလိုနဲ့ပဲ မောငျနှမတဈဝမျးကှဲတျောတဲ့ ကြှနျမနဲ့ကိုကွီးက နစေ့ဉျရကျဆကျဆိုသလိုပဲ လူလဈတာနဲ့ လိုးနကွေပါတယျ။ရာသီလာတဲ့ရကျတှဆေိုရငျ ကြှနျမက ကိုကွီးလီးကွီးကို စုပျပေးပါတယျ။အိမျကလူတှမေလဈလိုကျနဲ့ လဈလိုကျတာနဲ့ ကြှနျမအဖုတျကို ကိုကွီးကိုယကျခိုငျးပါတယျ။ကြှနျမကလဲ ကိုကွီးလီးကွီးကိုစုပျပေး ကြှနျမအဖုတျကိုလဲ ကိုကွီးက ယကျပေးနဲ့ သာယာတဲ့ဘဝလေးဖွဈနတေော့တာပေါ့ရှငျ။ ပွီးပါပွီ
ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေဟာ ပျှမ်းမျှအားဖြင့် အသက် (၁၃)၊ (၁၄)နှစ်လောက်မှာ ရာသီသွေးစပေါ်ပြီး အပျိုဖေါ်ဝင်ကာစဖြစ်ပါတယ်။ အစပထမမှာ လစဉ်မမှန်သေးပေမယ့် ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့ အစပြုပြီး နောက်ပိုင်းမှာလစဉ်မှန်သွားပါတယ်။ဒီလိုရာသီသွေးစပေါ်ပြီး အပျိုဖေါ်ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဟိုမုန်းဓါတ်တွေဖွံ့ဖြိုးပြောင်းလဲမှုကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ပြောင်းလဲမှုများ သိသိသာသာဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ အချစ်စိတ်ဆိုတာလည်း အဲဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်မတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစ၍ သန္ဓေတည်ခဲ့ရပါတယ်။ငယ်စဉ်ခလေးဘဝတုန်းက မိန်းခလေးသဘာဝလှချင်ပချင်တာရှိခဲ့ပေမယ့် အပျိုဖြစ်လာတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အလှအပတွေကို ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ယောင်္ကျားလေးတွေ သတိထားမိစေချင်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အလှအပကို ယောင်္ကျားလေးတွေမြင်စေချင်တယ်။ ဂရုတစိုက်ရှိစေချင်လာပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဘဲ ကျွန်မတို့မိန်းခလေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ယောင်္ကျားလေးတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို စွဲလန်းတာမျိုးအဲဒီယောင်္ကျားလေးနဲ့ အတူအနားမှာရှိနေတာ ရင်ထဲမှာကြည်နူးကျေနပ်နေရတာမျိုးတွေကနေစပြီး အဲဒီယောင်္ကျားလေးကနေ ကိုယ့်ကိုလာပြီးထိတာကိုင်တာ၊ နမ်းတာမျိုးတွေကို လိုလိုလားလား ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
ဒီကနေစပြီးကျွန်မတို့ မိန်းခလေးတွေဟာ ရည်းစားတွေထားကြပြီး ကာမမှုကို ရှေးရှုလာပါတော့တယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေမှာလည်း ဒီအချိန်မှာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေပြည့်စုံလာပြီဆိုတော့ သွေးသားတွေဆူဖြိုးထကြွလာတာကလည်း မဆန်းလှပါပေ။အခုဆိုလျှင် စိမ်းလဲ့ခင် လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်မအသက်ဟာ (၂၀)နှစ်ပြည့်ပြီးသွားပါပြီ။အိမ်မှာတော့ မိစိမ်းလို့ပဲ ခေါ်ကြပါတယ်။ကျွန်မက ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှာ (…. )ဒုတိယနှစ် ဖြေပြီးပါပြီ။အခုနှစ်တော့ ကိုဗစ်ဖြစ်နေတာကြောင့် ကျောင်းတွေပိတ်ထားလို့ အိမ်မှာပဲနားနေရပါတယ်။ဒီအချိန်ထိတော့ ကျွန်မမှာရည်းစားချစ်သူရယ်လို့ မရှိသေးပါဘူး။ကျွန်မက အနေအေးတာလဲ ပါတာပေါ့ရှင်။ပြီးတော့ ကျွန်မက ယောက်ျားလေးတွေကို မယုံဘူး။ရည်စားထားပြီး ဗိုက်ကြီးတာတွေ ဖျက်ချတာတွေက နားနဲ့မဆန့်အောင် ကြားနေရတာလေ။ရည်းစားလေးထားမိပါတယ် မယုံရတဲ့သူဆိုရင် အတင်းလုပ်သွားမှာလေ။အဲဒါကြောင့်ပဲ ရည်းစားမထားပဲ နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ အဲဒီ တစ်နေ့လေးအကြောင်းကို ကျွန်မပြောပြပါမယ်။
ကျွန်မတို့ အိမ်ကနှစ်ထပ်အိမ်ပါ။ အပေါ်ထပ်မှာက အမေ့ရဲ့အမကြီးတို့ သားအမိနေပြီး အောက်ထပ်ကတော့ ကျွန်မတို့နေပါတယ်။ကြီးဒေါ်ရဲ့ အပေါ်ထပ်ကို အိမ်ဘေးကလှေခါးကနေတက်ရပြီး သူတို့လှေခါးခြေရင်းနဲ့ ကျွန်မတို့အိမ်အောက်ထပ် ဝင်ပေါက်နဲ့က ကပ်နေတယ်။ ကြီးဒေါ်ရဲ့သား ကျွန်မအကိုဝမ်းကွဲက (…..)အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ နာမည်က ဇော်ဖြိုးလို့ခေါ်ပြီး အသက်က(၃၄)နှစ်လောက်ရှိနေပြီ။ ကျွန်မ အမေက အိမ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားပြီး အဖေကတော့ အရောင်းဝယ်လုပ်တာမို့ အမြဲလိုလို အိမ်မှာမရှိပါဘူး။အမေကလဲ ဆိုင်ထဲမှာပဲ ဈေးရောင်းနေတော့ အိမ်မှာက ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲပါပဲ။တစ်နေ့ကြတော့ ညနေမှောင်စပျိုးနေတဲ့အချိန်မှာ ရေချိုးပြီးလို့ အိမ်ဝင်ပေါက် ထွက်ပေါက်ဘေးမှာ ထောင့်ဖြတ်လေးထိုင်ပြီး လမ်းပေါ်ကိုလှမ်းငေးကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ အပေါ်ထပ်လှေခါးကနေ အကိုကြီးဇော်ဖြိုးက အောက်ဆင်းလာပါတယ်။ရေချိုးမလို့ဆင်းလာတာပါ။ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ကျွန်မလဲ ကိုကြီးကို ကြည့်လိုက်ရင်း အမှတ်မထင် ကိုကြီးရဲ့ပေါင်ကြားနေရာကို ကြည့်လိုက်တော့ ရှေ့ကို ထိုးထွက်နေတဲ့ အရာကြီးကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲဒါက ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လီးတန်ကြီးဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ ကျွန်မစိတ်တွေက ဖျက်ကနဲ လှုပ်ရှားသွားရပါတယ်။ “ဟင် ကိုကြီးလီးကြီးက တောင်နေပါလား အကြီးကြီးပဲ လို့ တွေးရင်း ကျွန်မစောက်ဖုတ်ထဲက လှိုက်ကနဲနဲ့ ယားသွားပြီး စောက်ရည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်လာပါတယ်။ဒီလိုပြောလို့ ကျွန်မကို ယွ လွန်းတယ်လို့ပြောရင်တော့ မိန်းကလေးတိုင်း ဒီလိုပဲလို့ ပြောရမှာပါပဲ။ဟုတ်တယ်လေ မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးရဲ့ လီးတွေကို တွေးပြီး အာသာဖြေတက်ကြတာက ထုံးစံပဲလေ။ကျွန်မလဲ မိန်းကလေးပဲဆိုတော့ ရည်းစားမထားဖူးပေမဲ့ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာတော့ နေ့စဉ်လိုလို ဖြေဖျောက်မိတာပေါ့။ကိုကြီးလဲ ပြောက်သွားရော ကျွန်မလဲ အခန်းထဲကို ဝင်ပြီး ကုတင်ပေါ်ကို ပက်လက်လေးလှန်ပြီး အဖုတ်လေးကို ပွတ်နေမိပါတော့တယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ စောစောက မြင်လိုက်ရတဲ့ ပုဆိုးအောက်ကထောင်ထနေတဲ့ ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးကို မြင်ယောင်နေတာပေါ့။ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးကို မြင်ယောင်ရင်း ကျွန်မလဲ လက်ညှိုးလေးကို အဖုတ်ထဲကို သွင်းလိုက်ပါတယ်။အရမ်းကောင်းတာပါပဲရှင်။တကယ့်လီးအစစ်မဟုတ်ပဲ စိတ်မှန်းနဲ့ လုပ်တာတောင် ဒီလောက်ကောင်းနေရင် ကိုကြီးရဲ့လီးကြီးနဲ့များ အလိုးခံလိုက်ရရင်တော့ ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲ လို့ တွေးနေမိပါတယ်။အဲဒီညနေကတော့ ကျွန်မလဲ ကိုကြီးလီးကြီးကို မှန်းပြီး လက်နဲ့လုပ်လိုက်တာ စောက်ရည်တွေကို တအားထွက်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံး မောသွားတာပဲရှင်။
နောက်နေ့မနက်ရောက်တော့ ကျွန်မရဲ့ စိတ်တွေက ကိုကြီးအပေါ်ကို အရင်ကလို မောင်နှမ တစ်ဝမ်းကွဲဆိုတဲ့ အမြင်မရှိတော့ပါဘူး။မြင်လို့လဲမရတော့ဘူး။ကျွန်မ ကိုကြီးကိုချစ်မိသွားပြီလေ ကိုကြီးရဲ့ ချစ်သူလေးလုပ်ပြီး ကိုကြီးနမ်းတာကို ခံချင်လာတယ်။ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးကိုလဲ ကိုင်ကြည့်ချင်လာတယ် ကျွန်မနို့လေးတွေကိုလဲ ကိုကြီးကို ကိုင်စေချင်လာတယ် အဖုတ်လေးကိုလဲ ကိုကြီးကို ယက်ခိုင်းချင်လာတယ် ကိုကြီးရယ် ကျွန်မကို ကိုကြီးလုပ်ချင်သလိုသာ လုပ်ပါတော့လို့ တွေးမိနေပါတော့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ အဖုတ်လေးကလဲ ကိုကြီးကိုမြင်တိုင်း ယွတက်နေပြီး အရည်လေးတွေကလဲ စိုရွှဲနေတာပါပဲရှင်။စိတ်တွေက မနေနိုင်လွန်းလာတော့ ကျွန်မလဲ ကိုကြီးကို မိန်းမတို့တက်အပ်တဲ့ ပညာတွေသုံးလိုက်တော့တာပေါ့။မိသားစုနှစ်ခုလုံးက ရေချိုးတဲ့နေရာက အတူတူပဲဆိုတော့ နေ့လည်ရောက်တော့ ကျွန်မရေချိုးဖို့ ရေကန်ရှိရာကို သွားလိုက်ပါတယ်။ရေချိုးတဲ့နေရာက ကိုကြီးအခန်းကနေကြည့်ရင် ထက်အောက်တန်းနေတာမို့ ကျွန်မလဲ သီချင်းလေးဆိုနေလိုက်ရင်း မျက်လုံးလေးနဲ့ ကိုကြီးအခန်းရှိရာကို မသိမသာလေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကိုကြီးလေ ကျွန်မရေချိုးဖို့ ပြင်တာကို ကြည့်နေတာတွေ့ရတော့ ကျွန်မလဲ ရင်ရှားထားတဲ့ ထဘီလေးကို အောက်နဲနဲ လျှောချပြီး ပြင်ဝတ်လိုက်ရင်း နို့တွေကို ပြလိုက်ပါတယ်။ကိုကြီးရှိရာကို လှမ်းမကြည့်တော့ပေမဲ့ ကြည့်နေမယ်ဆိုတာ သိတယ်လေ။ကျွန်မလဲ ကိုကြီးကို အမျိုးမျိုး လုပ်ပြနေရင်း အခုနေဆို ငါ့ကိုကြည့်ပြီး ကိုကြီးလီးကြီးက တောင်နေမှာပဲ လို့ တွေးမိတော့ ကျွန်မအဖုတ်လဲ စောက်ရည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်လာတာပေါ့ရှင်။လက်ညှိုးလေးကို ကိုကြီးလီးအမှတ်နဲ့ အဖုတ်ထဲကို ထိုးသွင်းချင်ပေမဲ့ ကိုကြီးကြည့်နေတာဆိုတော့ အဲလောက်ထိတော့ ကျွန်မ မရဲဘူးဖြစ်နေတယ်။
ရေချိုးပြီးလို့ ပြန်လာတော့ ကိုကြီးက အိမ်ပေါ်ကနေ ဆင်းလာတာကို တွေ့လိုက်ရတော့ ကျွန်မလဲ စိတ်ထဲကနေ ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။ကျွန်မပြတာတွေကြည့်ပြီး လီးကြီးတောင်နေလို့ ကျွန်မဆီလာတာဆိုတာ သိတာပေါ့ အဲဒါကြောင့်လဲ ကျွန်မကနေပဲ ကိုကြီးကို စကားစပြောလိုက်ပါတယ်။ “ကိုကြီး ရေမချိုးသေးဘူးလား မချိုးသေးရင် ညီမလေးအခန်းထဲက အဝတ်တန်း ပြုက်ကျနေလို့ ရိုက်ပေးဦးနော်” “အေး အေး ရိုက်ပေးမယ်လေ အခုလားမိစိမ်း” ဟုတ်ကိုကြီး လို့ ကျွန်မလဲပြောပြီး ရှေ့ကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရေစိုနေလို့ ထဘီလေးက ကိုယ်လုံးလေးမှာ ကပ်နေပြီး ဖင်လေးပေါ်လဲ ကပ်နေမယ်ဆိုတာ သိလို့ ကိုကြီးကြည့်ရအောင် ကျွန်မက ရှေ့ကနေ သွားပြလိုက်တာပါ။ရေစိုထဘီလေးက ဖင်အကွဲကြောင်းလေးပေါ်အောင်ကို ကပ်နေမှာဆိုတော့ ကိုကြီးကြည့်ပြီး စိတ်တွေ ထနေမှာသေခြာပါတယ်။အခန်းထဲရောက်တော့ ကျွန်မလဲ ရေမချိုးခင်က ကြိုတင်ပြီး ဖြုတ်ထားတဲ့ အဝတ်တန်းကို ကိုကြီးကို ရိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဝတ်တန်းရိုက်နေရင်း ကိုကြီးက ကျွန်မကိုမသိမသာကြည့်နေတာကို မသိသလိုပဲနေပြီး ထဘီလဲလိုက်ပါတယ်။ထဘီလဲပြီးတော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး တစ်ထည်ကို ကိုကြီးရှေ့မှာပဲ ယူပြီး ဖြန့်ကြည့်လိုက်ရင်း ကိုကြီးကို ဖျက်ကနဲ ကြည့်လိုက်တော့ ကိုကြီးလေ ကျွန်မ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကို စိုက်နေတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်မလဲ ကိုကြီးက အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးတွေကို ကြိုက်တဲ့စိတ်ရှိလို့နေမယ်ဆိုပြီး ကိုကြီးကို ပြောလိုက်ပါတယ်။
“ကိုကြီး ဒီအရောင်လေး လှလားဟင် ညီမလေးက ပန်းရောင်ထက် အသားရောင်ပိုကြိုက်တာ” “လှပါတယ် ပန်းရောင်က မိစိမ်းနဲ့ဆို ပိုလိုက်တယ် အရမ်းလှမှာပဲ “ “ဟုတ်လား ညီမလေးက ပန်းရောင်နဲ့ မလိုက်ဘူးထင်နေတာ အဲဒါဆိုရင် မနက်ဖန်ကြရင် ဈေးသွားဝယ်မယ် ကိုကြီးလိုက်ပို့နော်” “အေးပါ လိုက်ပို့မယ်မိစိမ်း ကိုကြီးလဲ ဝယ်စရာလေးရှိလို့” စကားပြောနေကြရင်း ကျွန်မလဲ ကိုကြီးကို ကျောလေးပေးပြီး ထဘီလေးကို ပါးစပ်ကနေကိုက်ပြီး ခြေထောက်ကနေ ဘောင်းဘီလေးကို ဝတ်လိုက်ပါတယ်။အပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတော့ ကိုကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ ပေါင်ကြားက လီးကြီးက ထိုးထောင်ပြီးထွက်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကိုကြီးရယ်…ညီမလေးလေ ကိုကြီးလီးကြီးကို မြင်ရရင် မနေနိုင်အောင်ပါပဲရှင် အဲဒီလီးကြီးကို ညီမလေးစုပ်ချင်လိုက်တာလို့ စိတ်ထဲကနေ ပြောနေမိပါတော့တယ်။ နောက်နေ့မနက်ရောက်တော့ ကျွန်မလဲ ကိုကြီးကိုခေါ်ပြီး ဈေးကိုသွားလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာ ကိုကြီးခါးကို တင်းနေအောင်ဖက်ရင်း လိုက်သွားတာပေါ့။လမ်းကမကောင်းလို့ ဂျိုက်ထဲဆိုင်ကယ်က ကျသွားလို့ ခုန်သွားရင် ကျွန်မလဲ နို့လေးတွေနဲ့ ကိုကြီးကျောကို မသိမသာလေး ပွတ်နေလိုက်ပါတယ်။ရင်လေးတွေခုန်နေရင်း ဈေးကိုဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကို မသိအောင်ပါပဲရှင်။ဈေးရောက်မှပဲ သတိဝင်လာပြီး ဝယ်မဲ့ဆိုင်ကို ကိုကြီးနဲ့အတူတူ လာလိုက်ကြပါတယ်။ကိုကြီးက ကျွန်မလက်လေးကို ကိုင်လိုက်တော့ ကျွန်မလဲ အလိုက်သင့်ပဲ ပြန်ကိုင်ထားလိုက်ပါတယ်။စိတ်ထဲကတော့ ကိုကြီးနဲ့များချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြရင် အခုလိုပဲ လက်ချင်းတွဲပြီး လျောက်လည်ပစ်လိုက်မယ်လို့ စိတ်ကူးနေလိုက်ပါတယ်။ဝယ်မဲ့ဆိုင်တော့ အတွင်းခံ ၃ထည်ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ကိုကြီးကြိုက်တဲ့ ပန်းရောင်လေးက ၂ထည် ကျွန်မကြိုက်တဲ့ အသားရောင်လေးက ၁ တည်ပေါ့။အိမ်ပြန်မလာခင် ကိုကြီးနဲ့ ရေခဲမုန့်ဝင်စားကြရင်း ကိုကြီးက သူ့ထဲက အသီးလေးတွေကို ကျွန်မထဲကို ထဲ့ပေးတော့လဲ ကြည်နူးလိုက်တာရှင်။ကိုကြီးလဲ ငါ့ကို ချစ်နေတာပဲ လို့ တွေးရင်း ရင်ထဲမှာ တစ်သိမ့်သိမ့်နဲ့ ခုန်နေရပါတယ်။ပြန်လာတဲ့ အခါမှာတော့ အသွားတုန်းကထက်ပိုပြီး ကိုကြီးကို ဖက်ထားလိုက်ပါတယ် ကိုကြီးဆီကရတဲ့ ယောက်ျားရနံ့ကလဲ ကျွန်မစိတ်တွေကို ယစ်မူးနေအောင် ပြုစားနေတာပေါ့။
နောက်ရက်တွေမှာတော့ ကျွန်မနဲ့ကိုကြီးရဲ့ ရင်းနှီးမှုက အရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကိုကြီး ကျွန်မကို ကြည့်တဲ့အကြည့်တွေက ဘာဆိုတာ ကျွန်မသိသလို ကျွန်မကြည့်တဲ့ အကြည့်တွေကိုလဲ ကိုကြီးက နားလည်သိရှိနေပါပီ။မကြာခဏလဲ မျက်လုံးချင်းစုံပြီးကြည့်ကြပါတယ်။ကြည့်တိုင်းလဲ တော်တော်နဲ့ အကြည့်ချင်းမခွာကြပါဘူး။ကြာလာတော့ တစ်ယောက်ရင်ထဲကို တစ်ယောက်ကဝင်ကြည့်သလို နားလည်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လဲ မောင်နှမတစ်ဝမ်းကွဲဆိုတဲ့ အသိက ကျွန်မတို့ကြားမှာ ကာဆီးထားလို့နေပါတယ်။ကိုကြီးကတော့ အကြီးဆိုတော့ သူက စ ရင် သူ့အပစ်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ မစရဲတာနေမှာလို့ ကျွန်မတွေးမိတော့ ကျွန်မကပဲ စ ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်မက စ ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ အစီစဉ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဘယ်လို စ မလဲပေါ့ နောက်ဆုံးတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အိန်ဒရေလဲ မပျက်အောင် ကိုကြီးလဲ သိအောင်ဆိုပြီး ကိုကြီးကြိုက်တဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီပန်းရောင်လေးကိုဝတ်ပြီး ကိုကြီးရှေ့မှာ ထဘီလေးကို မသိမသာလေး လျောချပြီး ဝတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မရဲ့အဖုတ်က တခြားမိန်းကလေးတွေထက် ပိုပြီးဖောင်းနေတော့ အတွင်းခံလေးပေါ်ကနေကြည့်ရင် ဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒါကို ကိုကြီးမြင်အောင် ပြချင်တာဆိုတော့ ထဘီလေးကို ခပ်ကြာကြာလေး အချိန်ဆွဲပြီး မျက်နာလေးကိုဘေးလွဲပြီး ဝတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ထဘီလေးကိုလဲ အောက်ကို အတော်လေးလျောချပြီးဝတ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒါမှ ကိုကြီးက ကျွန်မ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို မြင်ရမှာလေ။အဲလိုဝတ်ပြရင်း ကျွန်မစိတ်တွေက အရမ်းကို လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။ကိုကြီးကြည့်ရအောင်ပြနေရတော့ ပြတဲ့ ကျွန်မရော ရင်တွေအရမ်းခုန်နေပြီး စောက်ရည်တွေစိမ့်ထွက်နေရတာပေါ့။ကိုကြီးလီးကြီးကလဲ တအားကိုတောင်နေတာပဲရှင် ပုဆိုးထဲကကို ထိုးထွက်နေတာပဲ။အဲလို ပြပြီးတိုင်း ကျွန်မလဲ အခန်းထဲကို ပြေးရပါတယ်။မနေနိုင်တော့လောက်အောင်ကို အဖုတ်က ယားပြီး ယွနေလို့လေ အဲလိုအချိန်မှာ ကိုကြီးလီးကြီးကို မြင်ယောင်ပြီး လက်ညှိုးနဲ့ထိုးရတာက အရမ်းကောင်းတာပဲရှင် လက်ညှိုးကို ကိုကြီးလီးအမှတ်နဲ့ထိုးနေရင်း တခါတလေများဆိုရင် အားမရလို့ လက်ခလည်နဲ့ တအားစောင့်ထိုးနေမိတာပေါ့။စိတ်ထဲကတော့ ကိုကြီးလီးကြီးနဲ့ အလိုးခံနေတယ်လို့ မှန်းပြီးလုပ်နေတာပေါ့ရှင်။ခံစားရတဲ့ အရသာကတော့ ပြောမပြတက်အောင်ကိုပါပဲ စောက်ရည်တွေများဆိုရင် ရွှဲနေတာပဲ။ပြီးသွားလို့ ထွက်လာတဲ့ စောက်ရည်တွေကို ကိုကြီးကြိုက်တဲ့ ပန်းရောင်အတွင်းခံလေးနဲ့ သုတ်လိုက်ရင်း စောက်ရည်တွေစိုနေတဲ့ အတွင်းခံလေးကို ကိုကြီးမြင်အောင် ပြချင်လာပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်မလဲ ရေးချိုးမလို လုပ်ပြီး အတွင်းခံလေးကို ရေကန်မှာ ချထားလိုက်ပြီး တခုခုမေ့ သလိုမျိုး အခန်းကိုပြန်လာလိုက်ပါတယ်။ပြန်မလာခင်တော့ ကိုကြီးကို စကားလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲရောက်မှ အပေါက်ကနေ ချောင်းကြည့်နေလိုက်တော့ ခဏနေတော့ ကိုကြီးက ဆင်းလာပြီး မရဲတရဲနဲ့ ကျွန်မချထားတဲ့ စောက်ရည်တွေ စိုရွှဲနေတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ကိုင်ကြည့်နေတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ကိုင်ကြည့်နေရင်း ကိုကြီးက အတွင်းခံလေးကို ဖြန့်ကြည့်ပြီးနမ်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ ကျွနိမပြီးသွားလို့ ထွက်ထားတဲ့ စောက်ရည်တွေကို လျှာနဲ့ယက်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်မလေ ကိုကြီးက ကျွန်မစောက်ရည်တွေကို ယက်နေတာမြင်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကြေနပ်မိတာပဲ အဖုတ်လေးထဲကလဲ လှိုက်ကနဲနဲ့ ယွတက်လာပါတယ်။ ကိုကြီးရယ်…ညီမလေး ကို အရမ်းကိုချစ်လို့ စောက်ရည်တွေကို ယက်နေတာပေါ့နော် လို့ ပြောနေမိပါတယ်။ကိုကြီး ယက်ချင်တဲ့ စောက်ရည်တွေကို ညီမလေး ပေးယက်ပါ့မယ် ညီမလေးအဖုတ်ကို ကိုကြီးယက်ပေးပါတော့ ထွက်လာတဲ့ စောက်ရည်တွေကို ကိုကြီးစိတ်ကြိုက်ယက်နေပါလို့ စိတ်ထဲကနေ ပြောနေမိပါတော့တယ်ရှင်။ အချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကုန်လာတာနဲ့အမျှ ကိုကြီးနဲ့ကျွန်မနဲ့က မောင်နှမတစ်ဝမ်းကွဲလဲမက ချစ်သူတွေလဲမကျ ဖြစ်နေကြပါပြီ။ကိုကြီးက ကျွန်မခါးလေးကိုဖက်လာရင် ကျွန်မက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ အဖက်ခံသလို ပါးလေးကို နမ်းရင်လဲ ပြုံးပြီးတော့ အနမ်းခံနေလိုက်ပါတယ်။တခါတလေကြရင်လဲ ဂါဝန်လေးဝတ်ပြီး ကိုကြီးရှေ့မှာ ကုန်းပြလိုက်ပါတယ်။ဂါဝန်လေးကပါးတော့ ကိုကြီးကြည့်ရင် အောက်က အတွင်းခံအရာလေးနဲ့ အတွင်းခံလေးကို ကိုကြီးမြင်နေရမယ်ဆိုတာသိတော့ ဂါဝန်ပါးပါးလေးတွေဝတ်ပြီး ကိုကြီးရှိရာကို မယောင်မလည်လုပ်နေလိုက်ပါတယ်။အဲလိုအခါမျိုးဆိုရင် ကိုကြီးက ကျွန်မဖင်လေးကို ကြည့်နေတော့တာပါပဲ။ကျွန်မကလဲ ကိုကြီးကို ကြည့်စေချင်တာဆိုတော့ ကိုကြီးရှေ့မှာပဲ မျက်နှာလေးကို ဘေးလွှဲပြီး ဂါဝန်လေးကို ဒူးလေးပေါ်အောင် မ တင်လိုက် ကုန်းလိုက် လုပ်ပြနေလိုက်တာပေါ့။ကိုကြီးက ကျွန်မအဖုတ်လေးရှိတဲ့ ပေါင်ကြားနေရာလေးကိုလဲ ကြည့်နေလေ့ရှိပါတယ်။
အဲလို ကိုကြီးကကြည့်နေပြီဆိုရင် ကျွန်လဲ ယားလို့ကုပ်တာလိုလိုနဲ့ ပေါင်လေးကို ပွတ်လိုက် ပေါင်ကြားက အဖုတ်လေးကို ပွတ်လိုက်နဲ့ လုပ်ပြနေလိုက်ပါတယ်။မျက်နာလေးကတော့ ဘေးကိုလွဲထားတာပေါ့။တချက်ချက် မျက်လုံးကိုထောင့်ကပ်ပြီး ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ကျွန်မလုပ်ပြတာတွေကို ကိုကြီးတစ်ယောက် ကြည့်နေတယ် လီးကြီးတောင်နေတယ်ဆိုတာတော့ သိရပါတယ်။ကျွန်မက တစ်ဝမ်းကွဲအကိုကြီးကို ဒီလိုတွေလုပ်ပြနေတာက ကိုကြီးကို ယုံလို့လေ။ကိုကြီးက ကျွန်မကို ထိခိုက်နစ်နာအောင် မလုပ်ဘူးဆိုတာသိနေလို့လေ။တစ်ဝမ်းကွဲညီမဖြစ်တဲ့ ကျွန်မကို ညီမလေးလိုရော ချစ်သူတစ်ယောက်လိုရော ချစ်နေတယ်ဆိုတာ သိနေလို့ စိတ်ချယုံကြည်ပြီး လုပ်ပြနေတာပါ။ကျွန်မနဲ့ကိုကြီးက မောင်နှမတစ်ဝမ်းကွဲတော်တော့ ကျွန်မက ဘာမလုပ်နဲ့ ညာမလုပ်နဲ့ဆိုရင် မလုပ်ပဲနေမဲ့ အကိုကြီးဆိုတာ သိနေတော့ ကျွန်မလဲ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း အဖုတ်လေး ယွရင် ယွသလို ထင်တိုင်း လုပ်ပြနေတာပေါ့။ဟုတ်တယ်လေ တစ်စိမ်းရည်းစားကမှ အတင်းဖက်ပြီး အတင်းလိုးနေဦးမှာ။ကိုကြီးက အဲလို ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတာ မောင်နှမဝမ်းကွဲအသိနဲ့ သိနေတာပေါ့။အဲဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်မလဲ စိတ်ရှိတိုင်း အဖုတ်လေးယားတိုင်း လုပ်ပြနေလိုက်တာ တစ်နေ့ကြတော့ အိမ်မှာ လူတွေမရှိတုန်း ကိုကြီးရောက်လာပါတယ်။ရောက်လာတော့ ခါတိုင်းလိုပဲ ပါးလေးကို နမ်းမယ်လုပ်တော့ ပါးကိုနမ်းတာမဟုတ်ပဲ နှုတ်ခမ်းလေးကို အနမ်းခံချင်နေတဲ့ကျွန်မက မျက်နာလေးကို မော့ထားပြီး မျက်လုံးလေးမှိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နှုတ်ခမ်းလေးတွေတော့ ခပ်ဟဟလေး လုပ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မဆန္ဒကိုသိတဲ့ ကိုကြီးကလဲ အချိန်မဆိုင်းပါဘူး သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ကျွန်မကို နမ်းလာပါတယ်။အပေါ်နှုတ်ခမ်းလေးကို စုက်လိုက်တော့ ကျွန်မလဲ အလိုက်သင့်ပဲ ကိုကြီးရဲ့ အောက် နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်လိုက်ပါတယ် ပြီးတော့ ကျွန်မရဲ့ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာထဲကို ကိုကြီးရဲ့ လျှာက တိုးဝင်လာပါတယ် ဝင်လာတဲ့ လျှာနဲ့ ကျွန်မရဲ့လျှာလေးနဲ့ ထိတွေ့လိုက်မိပြီဆိုရင်ပဲ ခံစားလိုက်ရတဲ့ အရသာက ပြောမပြတက်လောက်အောင်ကို ကောင်းပါတယ်။တကိုယ်လုံးကို သိမ့်သိမ့်တုန်နေအောင်ကို ခံစားနေရပါတယ် လေထဲမှာလွင့်မျောနေသလိုပါပဲ။ခံစားနေရတဲ့ အရသာတွေကိုတိုးပြီး ခံစားချင်တာကြောင့် ကျွန်မရဲ့လျှာလေးကို ကိုကြီးရဲ့လျှာနဲ့ ပြန်ပြီး ထိုးပွတ်နေမိပါတယ်။လျှာချင်း ထိတွေ့နေရတဲ့ အရသာက အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ ဘာကိုမှသတိမရတော့ပါဘူး ကျွန်မသိတာက ကိုကြီးလျှာနဲ့ ကျွန်မလျှာ ထိတွေ့ပြီးစုပ်နေရဖို့ပါပဲ။ကိုကြီးရဲ့ အနမ်းတွေကြောင့် မူးယစ်ရီဝေနေတုန်း ကျွန်မနို့တွေကို ကိုကြီးက အကျီ်ပေါ်ကနေ ကိုင်လာပါတယ်။ပြီးတော့ အကျီ်လေးအောက်ကိုဝင်လာပြီး ဘော်လီ လေးအောက်ကို ဝင်လာဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ကျွန်မလဲ ကိုကြီးကို ချစ်တဲ့စိတ်တွေရော အဖုတ်လေးထဲက တစ်ယွယွဖြစ်လာတာရောကြောင့် အကျီ်ကိုရော ဘော်လီလေးကိုပါ လှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။နို့လေးတွေပေါ်လာတာနဲ့ ကိုကြီးက ကျွန်မနို့တွေကို လက်နဲ့ဆုပ်နယ်ပါတော့တယ်။နို့သီးလေးတွေကိုချေရင်း နို့လေးတစ်လုံး ဆွဲစို့လိုက်ပါတယ်။နို့လေးတစ်ဖက်ကို အစို့ခံရင်း တစ်ဖက်ကနို့သီးလေးကို အချေခံနေရတာကအရမ်းကောင်းတာပဲရှင်။ခဏနေတော့ ကိုကြီးလက်တွေက ကျွန်မရဲ့ ထဘီလေးကို ဖြေပြီး အတွင်းခံလေးထဲကို ဝင်လာပါတယ်။ကိုကြီး လုပ်ပေးတာတွေကြောင့်အရမ်းကို စိတ်တွေထနေတဲ့ ကျွန်မအဖုတ်က စောက်ရည်ကြည်တွေထွက်နေပါတယ်။
စောက်ရည်တွေစိုအိနေတဲ့ အဖုတ်ကို ကိုကြီးက ကိုင်ပွတ်ပြီး စောက်စိလေးကို ဆွပေးတော့ အရမ်းကို ကောင်းလိုက်တာရှင်။မကြာဘူး ကိုကြီးလက်ညှိုးက အဖုတ်ထဲကို ဝင်လာပါတယ် စောက်ရည်ကြည်တွေ ထွက်နေတာဆိုတော့ လက်ညှိုးက အသာပဲ ဝင်သွားပါတယ် ဝင်သွားပြီးတာနဲ့ ပြန်ထုက် ပြန်သွင်း လုပ်ပေးနေတော့ ကောင်းလွန်းလို့ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံး အားမရှိတော့လို့ ကိုကြီးရင်ခွင်ထဲကို လှချလိုက်ရပါတယ်။ကိုကြီးကတော့ ကျွန်မထဘီလေးကို လှန်တင်ပြီး အတွင်းခံထဲကနေ လုပ်နေရတာ အားမရလို့ ဘောင်းဘီလေးကို ဆွဲချွပ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်မလဲ ကိုကြီးလုပ်သမျှကို အလိုက်သင့်လေးနေပေးရင်း ပေါင်လေးတွေကို ကားပေးထားလိုက်ပါတယ်။ကိုကြီးက ကျွန်မကို အောက်မှာလှဲခိုင်းပြီး ပေါင်ကြားထဲကို ဝင်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်မသိလိုက်ပါပီ ကိုကြီးက ကျွန်မ အဖုတ်ကို ယက်ပေးတော့မယ်ဆိုတာ။အဖုတ်က မနေနိုင်တော့လောက်ကို ယားနေ ယွနေပေမဲ့ အကိုတစ်ဝမ်းကွဲကို စောက်ရည်တွေစိုရွှဲနေတဲ့ အဖုတ်ကိုယက်မှာတော့ အားနာမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲ အဲလိုအောက်မေ့နေတုန်း ပေါင်ကြားကို ကိုကြီးခေါင်းက ရောက်လာပြီး လျှာလေးနဲ့ အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကို ယက်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ကျွန်မဖင်လေး ကော့တက်သွားပြီး မျက်လုံးလေးတွေမှိတ်ကျသွားတော့တယ်။ကိုကြီးလျှာလေးက ပေးတဲ့အရသာတွေက ကောင်းလွန်းတော့ ခံစားနေရတဲ့ အရသာပေါ်မှာပဲ စိတ်ကရောက်သွားတယ်။ကောင်းလွန်းတဲ့ အရသာတွေကြောင့် ကျွန်မလဲ သတိလက်လွတ်နဲ့ ကိုကြီးခေါင်းက ဆံပင်တွေကိုဆွဲပြီး အဖုတ်နဲ့ တအားကပ်ထားခိုက်မိပါတယ်။အကွဲကြောင်းထိပ်က စောက်စိလေးကို လျှာနဲ့ထိုးကော်ပြီး ယက်လိုက်ရင် ဖင်လေးကော့တက်သွားရပါတယ်။စောက်စိလေးကို ယက်နေရင်း လက်နဲ့ အဖုတ်ထဲကို ထိုးပေးနေတော့ တစ်ကိုယ်လုံးကို ကော့ပြန်နေအောင်ကို ကောင်းတာပါပဲရှင်ေ။ကိုကြီးရဲ့ လျှာနဲ့ယက်ပေးနေတာရော လက်နဲ့ထိုးပေးနေတာတွေရောကြောင့် ကျွန်မလဲ ကိုကြီးဆံပင်တွေကိုပဲ အတင်းဆွဲပြီး ယက်ပေးဖို့ ပြောနေမိပါတော့တယ်။
အားးကောင်းလိုက်တာ ကိုကြီးရယ် ယက်ယက် ညီမလေးအဖုတ်ကို တအားယက်ပေး အစိလေးရော စုပ်ပေး အားးးကောင်းတယ် ညီမလေးမနေနိုင်တော့ဘူး အဖုတ်ထဲက တအားကောင်းနေပီ ပီးတော့မယ် ညီမလေးပီးတော့ ကိုကြီးးးးအားးးး ကျွန်မလဲ အဖုတ်ထဲက အရမ်းကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေကြောင့် ကိုကြီးကိုပဲ တစာစာနဲ့ တောင်းဆိုမိနေတော့တယ်။ခဏနေတော့ တစ်ကိုယ်လုံး လေထဲလွင့်မျောသွားသလိုခံစားလိုက်ရပြီး အဖုတ်ထဲကနေ စောက်ရည်တွေ ထွက်ကုန်ပါတယ်။ အားးးကိုကြီးးးးအားးး ညီမလေးးးကောင်းးးလိုက်…တာ…အားးးကိုကြီးရေ အားးးညီမလေးပြီးပီကိုကြီးရဲ့ အောင်မလေးးးကောင်းလိုက်တာကိုကြီးရယ် ညီမလေးအဖုတ်ထဲက ကောင်းလိုက်တာ ဟင်းးးးး စောက်ရည်တွေထွက်ပြီး ပြီးသွားတော့ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးနှုံးသွားတာပဲရှင်။ကိုကြီးကိုလဲ ချစ်သထက်ချစ်သွားမိပါတယ်။ကျွန်မလဲ ကိုကြီးကို ကောင်းစေချင်တာကြောင့် ပုဆိုးထဲကနေ ထောင်ထနေတဲ့ လီးကြီးကို လှမ်းကိုင်လိုက်ပါတယ်။ကိုကြီးရဲ့ တောင်နေတဲ့လီးကြီးက အားရစရာကြီးပါရှင်။ကျွန်မလဲ ကိုကြီးပုဆိုးကိုဆွဲချွပ်ပြီး တောင်နေတဲ့ လီးကြီးကို နှုတ်ခမ်းလေးတွေနဲ့ စုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါမှလီးမစုပ်ဘူးပေမဲ့ ကိုကြီးကို ကောင်းစေချင်တာကြောင့် လီးထိပ်ဖူးကြီးကို လျှာလေးနဲ့ယက်ပေးရင်း ရေခဲချောင်းစုပ်သလို တစ်ပျွတ်ပျွတ်နဲ့ စုပ်နေလိုက်ပါတယ်။ကိုကြီးကတော့ ကျွန်မနို့လေးတွေကို ကိုင်နေပြီး စုပ်ပေးတာကို ခံနေပါတယ်။ကျွန်မလဲ ကြားဖူး ဖက်ဖူးထားတဲ့ ထဲကအတိုင်းကိုကြီးလီးကြီးကို အစွမ်းကုန်ပြုစုပေးနေလိုက်ပါတယ် မကြာခင်မှာပဲ ကိုကြီးရဲ့ မသီမသအသံကို ကြားလိုက်ရပြီး လီးကြီးထဲကနေ သုတ်ရည်တွေ ထောင်ပန်းလာပါတယ် ကိုကြီးအပေါ်ကို ချစ်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပဲ ထွက်လာသမျှလရည်တွေကိုမျိုချပစ်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်လေ ကိုကြီးလဲ ကျွန်မအဖုတ်ထဲကနေထွက်တဲ့ စောက်ရည်တွေကို ယက်ပေးရင်းမြိုချသေးတာပဲ ကျွန်မလဲကိုကြီး လရည်တွေကို မြိုချရမှာပေါ့၊စိတ်ထဲမှာလဲ အရမ်းပဲ ကြည်နူးပျော်ရွှင်နေပါတယ်၊ချစ်ရတဲ့ ကိုကြီးနဲ့ အခုလို နေရတာက ကျွန်မအတွက်တော့ အလွန်ကို ကျေနပ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ကိုကြီးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ မှီနေရင်း ကိုကြီးဖက်ထားတာကို ပြုံးပြုံးလေး နေနေလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ရဲ့ နောက်ရက်တွေမှာတော့ ကိုကြီးနဲ့ကျွန်မအတွက် တကယ့်ကိုသာယာတဲ့ နေ့လေးတွေပါပဲ။
လူလစ်တာနဲ့ ကိုကြီးကနမ်းပြီး အဖုတ်လေးကို ယက်ပေးပါတယ် ကျွန်မကလဲ ကိုကြီးရဲ့လီးကြီးကို ပါးစပ်လေးနဲ့မဆန့်မပြဲစုပ်ပေးပါတယ်။ညရောက်ရင်လဲ လူကြီးတွေအိပ်တာနဲ့ ကျွန်မတို့က အိမ်အောက်မှာ ခိုးတွေ့ကြပါတယ်။ညဆိုတော့ လွပ်လပ်တာကြောင့် ကျွန်မလဲ ထဘီလေးကိုချွပ်ပြီး ကိုကြီးရဲ့မျက်နာပေါ်ကိုတက်ထိုင်ပြီး ကိုကြီးရဲ့မျက်နာကို ကျွန်မအဖုတ်နဲ့ အားရပါးပွတ်နေလိုက်ပါတယ်။တခါတလေကြရင်လဲ ကိုကြီးက ကျွန်မကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး အဖုတ်ကိုနောက်ကနေယက်ပေးပါတယ်။ဖင်လေးကိုဖြဲပြီး ဖင်ပေါက်လေးကို ကိုကြီးကယက်ပေးရင်များ အရမ်းကိုကောင်းတာပါပဲရှင်။ဖင်ပေါက်လေးကို အယက်ခံနေရင်း အဖုတ်လေးကို လက်နဲ့အလိုးခံနေရတာက အရမ်းကိုကောင်းလွန်းလို့ ကျွန်မလဲ စောက်ရည်တွေအိုင်ထွနိးနေအောင်ကို ထွက်ပြီး ပြီးနေရပါတယ်။မောင်နှမဝမ်းကွဲချင်းဆိုတဲ့ အသိကလဲ ကျွန်မကိုပိုပြီး စိတ်တွေထစေပါတယ်။ဟုတ်တယ်လေ ကိုယ့်အကိုဝမ်းကွဲကို အဖုတ်ယက်ခိုင်းတာ စောက်ရည်တွေတိုက်ရတာက ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ ခံစားမှုပါပဲရှင်။ကိုကြီးရဲ့လီးကြီးကိုလဲ ချစ်လိုက်ကို မပြောပါနဲ့တော့ရှင် စုပ်မ၀ ကိုင်မဝအောင်ကို ဖြစ်နေရပါတယ်။ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးကိုနေ့တိုင်း ကိုင်နေရ စုပ်နေရတော့ ကြာလာတော့ ကျွန်မအားမရတော့ပါဘူး အဲဒီလီးကြီးကို ကျွန်မအဖုတ်ထဲသွင်းပြီး အလိုးခံချင်လာပါတယ်။လီးကြီးကကြီးတော့ အလိုးခံလိုက်ရရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိလာတော့ အလိုးခံချင်လာတာပေါ့။ဒါနဲ့ ကိုကြီးကိုလိုးပေးဖို့ပြောတော့ ကိုကြီးကကျွန်မကို ဆေးကဒ်လေးတစ်ကဒ်ပေးပါတယ် ဘာဆေးလဲမေးတော့ ဗိုက်မကြီးအောင်သောက်တဲ့ဆေးတဲ့လေ ကျွန်မလဲပျော်သွားတာပေါ့ ဆေးသောက်ပြီးတဲ့ ညရောက်လာတော့ ကိုကြီးလိုးတာကို ခံရတော့မယ်ဆိုတာသိနေတော့ ကျွန်မလေ ရင်တွေခုန်လိုက်တာရှင်။
ည ၁၁နာရီကျော်လောက်ကျတော့ ကိုကြီးနဲ့တွေ့နေကြနေရာမှာတွေ့ကြပါတယ်။တွေ့ကြတာနဲ့ ဖက်ကြနမ်းကြပေါ့ရှင်။ကျွန်မနှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ကိုကြီးကစုပ်ပြီး ကျွန်မလျာလေးကိုလဲ ဆွဲစုပ်နေတာပေါ့ ပြောရဦးမယ် ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ နမ်းရတာက အင်မတန်မှကိုကောင်းလွန်းလှပါတယ်။နှုတ်ခမ်းချင်းတော့ပြီး လျှာချင်းပွတ်ဆွဲနေရရင် တစ်ကိုယ်လုံးကို လေထဲမျောနေသလိုပါပဲ။တစ်ကိုယ်လုံးကို သိမ့်သိမ့်တုန်နေအောင်ကို ခံစားရတဲ့ အရသာတွေက ကောင်းလွန်းတော့ အဲဒီအရသာကို လက်မလွတ်ချင်လောက်ပါပဲရှင်။အနမ်းခံနေရင်း နို့တွေကိုအကိုင်ခံနေရတာကလဲ ဖီးတမျိုးပါပဲ။ကိုကြီးနဲ့ကျွန်မလဲ အဲဒီညက အဆုံးစွန်သောအရသာတွေခံစားကြဖို့အတွက် အဝတ်တွေအကုန်ချွပ်လိုက်ကြပါတယ်။ပြီးတာနဲ့ ကျွန်မလဲ ဒူးထောင်ပြီးပေါင်တွေကို အစွမ်းကုန်ကားပေးလိုက်ပါတယ်။ပေါင်တွေကားပေးလိုက်တော့ ကိုကြီးက ကျွန်မအဖုတ်ကို ယက်တော့တာပေါ့။စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ဖြဲပြီး စောက်စိလေးကို စုပ်နေတာများ ကောင်းလိုက်တာရှင်။အကွဲကြောင်းလေးကို လျှာနဲ့ယက်ပေးလိုက် အစိလေးကို စုပ်လိုက် လုပ်နေတော့ စောက်ရည်တွေက တသွင်သွင်နဲ့ထွက်နေရပါတယ်။ကိုကြီးရဲ့ လျှာကြီးက ကျွန်မအဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကို ပင့်ယက်လိုက်ရင်များ ကျွန်မလေ ဖင်လေးကိုကြွတက်နေတာပဲရှင်။စောက်ရည်တွေလဲ အကြိမ်ကြိမ်ကိုထွက်ပြီး ပြီးနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲ ကိုကြီးက ဆက်ပြီး ယက်နေတာကြောင့် ပြီးသွားပေမဲ့ ခံချင်တဲ့စိတ်ကတော့ လျော့မသွားပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မကပဲ တော်ပါတော့ ကိုကြီးရယ် ညီမလေးကို ကိုကြီးလီးကြီးနဲ့ လိုးပေးပါတော့လို့ ပြောလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီကြမှပဲ ကိုကြီးက ကျွန်မပေါင်ကြားထဲကို ဝင်လာပါတယ်။ပီးတော့ ကျွန်မအဖုတ်လေးကို ဖြဲပြီး လီးထိပ်ဖူးကြီးကို ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေ အလိုးခံတဲ့ အပေါက်ဝလေးမှာ တေ့လိုက်ပါတယ်။လီးထိပ်ဖူးကြီး စောက်ခေါင်း အ၀ လေးမှာ တေ့လာတာနဲ့ ကျွန်မလဲ အံလေးကျိတ်ပြီး ကိုကြီးရဲ့လီးကြီး အဖုတ်ထဲဝင်လာမှာကို စောင့်နေလိုက်ပါမယ်။
ဟင့်…ကိုကြီးလေ သူ့လီးကြီးကို မသွင်းသေးပဲ အကွဲကြောင်းထိပ်က စောက်စိလေးကို ထိပ်ဖူးကြီးနဲ့ ထိုးဆွနေပြန်ပါတယ်။ကျွန်မလဲ အလိုးခံချင်စိတ်က တအားများနေတော့ ကိုကြီးလီးကြီးကို ကျွန်မလက်လေးနဲ့ လှမ်းကိုင်ပြီး အဖုတ်အဝမှာတေ့ပြီး ဖင်လေးကို အောက်ကနေ ကော့တင်လိုက်ပါတယ်။ခံချင်နေတဲ့စိတ်တွေကြောင့် အဖုတ်ကနေ စောက်ရည်တွေက ထွက်နေတော့ ကော့လိုက်တာနဲ့ လီးထိပ်ဖူးကြီးက ဝင်သွားပါတယ်။ကိုကြီးက နေ့တိုင်းလိုလို လက်နဲ့ထိုးနေတာရော ကျွန်မကလဲ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေလာတာ ကြာတာက တစ်ကြောင်းကြောင့် ကျွန်မအဖုတ်က အပေါက်လေးက နဲနဲကျယ်နေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လဲ လီးထိပ်ဖူးကြီးက ဝင်သွားတာပါ။ကျွန်မက ဖင်လေးကော့ပြီး လီးကြီးကို သွင်းယူလိုက်တော့ ကိုကြီးကလဲ အလိုက်တသိနဲ့ လီးကြီးကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သွင်းပေးပါတယ်။လီးကြီး ကျွန်မအဖုတ်ထဲ ဝင်လာလေလေ ကျွန်မဖင်လေးက ကော့တက်လေ ဖြစ်နေရပါတယ်။ကိုကြီးကလီးကြီးကို ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့လဲ အဖုတ်အတွင်းသားနုနုလေးတွေကို ထိပ်ဖူးကြီးဘေးက ဒစ်ကြီးက ပွတ်ဆွဲသွားတော့ ကျွန်မရင်ထဲက အူအသဲတွေကို ဆွဲထုတ်လိုက်သလိုပါပဲရှင်။အဲဒီနောက်မှာတော့ ကိုကြီးက သူ့လီးကြီးကို ဆော့ဆောင့်ပြီး ကျွန်မအဖုတ်ကို လိုးပါတော့တယ်။ကောင်းလိုက်တာတော့ မပြောပါနဲ့တော့ရှင်။အခုကျွန်မကိုလိုးနေတာက ကျွန်မဒေါ်ကြီးရဲ့သား ကျွန်မအကိုတစ်ဝမ်းကွဲဆိုတာ သိနေရတော့ စိတ်တွေကလဲ အရမ်းကို လှုပ်ရှားနေရပါတယ်။မောင်နှမဝမ်းကွဲချင်းလိုးနေကြတာဆိုတဲ့ အသိက ကျွန်မကိုပိုပြီး အလိုးခံချင်စိတ်တွေဖြစ်နေစေပါတယ်။အလွန်မင်း တက်ကြွနေတဲ့ စိတ်တွေကြောင့် ကျွန်မလဲ ပေါင်တွေကိုအစွမ်းကုန်ကားပြီး ဖင်လေးကော့ပြီး အလိုးခံနေလိုက်ပါတယ်။အပေါ်ကနေ ဆောင့်လိုးနေတဲ့ ကိုကြီးကိုလဲ ဖက်ထားရင်း လိုးပေဖို့ပဲ တောင်းဆိုမိနေပါတယ်။
“အား…ကိုကြီး လိုး လိုး ညီမလေးအဖုတ်ကို တအားလိုး အားးးညီမလေးကို မညှာနဲ့ ကိုကြီးရဲ့ညီမတစ်ဝမ်းကွဲကို တအားလိုးပါ အားးး ကောင်းလိုက်တာကိုကြီးရယ်” “ကိုကြီးလဲ ကောင်းလိုက်တာကွာ မိစိမ်းအဖုတ်က တအားလိုးလို့ကောင်းတာပဲ မိစိမ်းကို ကိုကြီးလိုးချင်နေတာကြာပြီ အခုမှပဲ လိုးရတော့တယ်” “လိုးပါကိုကြီးရယ် စိတ်ရှိသလောက်သာလိုးပစ်လိုက်စမ်းပါ ညီမလေးလဲ ကိုကြီးလိုးတာကို ခံချင်နေတာ ကြာပါပီရှင်” ကျွန်မက ပြောလိုက်တော့ ကိုကြီးလေ သူ့လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်ပြီး ကျွန်မအဖုတ်ကို ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးပါတော့တယ်။အားရလိုက်တာကို မပြောပါနဲ့တော့ရှင်။စောက်ရည်တွေကလဲ အဖုတ်ထဲကနေ ပေါင်တွေအထိကို စီးကျနေပါတယ်။ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးနဲ့ အလိုးခံနေတဲ့အရသာတွေက ကောင်းလွန်းတော့ ကျွန်မလဲ စိတ်ရှိသလိုကို အော်ပြီး အလိုးခံနေလိုက်ပါတယ်။ကိုကြီးရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့လိုးဆောင့်မှုတွေကြောင့် ကျွန်မအဖုတ်ထဲမှာ အီဆိမ့်နေအောင်ကို ကောင်းနေရပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်မပြီးချင်လာပါတယ် ဒါနဲ့ပဲ ကိုကြီးကို ပြောလိုက်မိပါတယ်။
“ကိုကြီး လိုး လိုး ညီမလေးပြီးတော့မယ် အားးးးကောင်းတယ်ကိုကြီးရေ…လိုးပါ ညီမလေးအဖုတ်ကို တအားလိုးပါ အားးးကိုကြီးးးးရေ….အားးးး” “ကိုကြီးလဲ ပီးတော့မယ်မိစိမ်း တူတူပီးကြမယ် မိစိမ်းအဖုတ်ထဲကို ကိုကြီးရဲ့လီးရည်တွေ ပန်းထဲ့ပေးမယ်” “ဟုတ်ကိုကြီး လီးရည်တွေပန်းထဲ့ပေး အားးးကိုကြီးးးးညီမလေးပြီးတော့မယ်…အားးးကိုကြီးရေ ညီမလေးမရတော့ဘူး အဖုတ်ထဲက အရမ်းကောင်းနေပီ အားးးကိုကြီးးးလီးကြီးနဲ့တအားလိုးပေးးးအားးးကောင်းလိုက်တာ အလိုးခံရတာ ကောင်းလိုက်တာ အားးးကိုကြီးရေ… ညီမလေးးးအားးးညီမလေးးးပီးတော့မယ် အားးးကိုကြီးရေ…အားးးညီမလေးပီးပီကိုကြီးရဲ့ အားးးကောင်းလိုက်တာ ကိုကြီးရယ်….” ကိုကြီးက သူ့လီးကြီးနဲ့ တအားဆောင့်ပြီးလိုးပေးမှုကြောင့် ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးကို ကော့ပျံပြီး ပြီး သွားရပါတယ်။စောက်ရည်တွေကလဲ ထွက်တာကို မပြောပါနဲ့တော့ရှင်။အရင်က ကျွန်မဟာကျွန်မ လက်နဲ့လုပ်တာနဲ့ ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးနဲ့ အလိုးခံရတာက ဘာမှကို မဆိုင်အောင်ကို ကောင်းလှပါတယ်ရှင်။အလိုးခံရလို့ပြီးသွားတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အရသာတွေကို ခံစားနေစဉ်မှာပဲ ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးကနေ လီးရည်တွေပန်းထွက်လာပါတယ်။အလိုးခံရလို့ ကောင်းတဲ့အရသာတွေကို ခံစားနေတုန်းမှာပဲ အဖုတ်ထဲကို လီးရည်တွေနဲ့ အပန်းခံလိုက်ရတော့ စောက်ဖုတ်ထဲကိုနွေးသွားတာပဲရှင်။ကိုကြီးရဲ့လီးကြီးနဲ့ အလိုးခံလိုက်ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်မလေ ကိုကြီးနဲ့မခွဲနိုင်အောင်ကို ဖြစ်သွားရပါတယ်။အချိန်တိုင်းလိုလို ကိုကြီးလိုးတာကို ခံချင်နေပါတယ် ကိုကြီးလီးကြီးကို အချိန်ပြည့်ကိုင်နေချင်ပါတယ်။မာပြီး တောင်နေတဲ့ လီးကြီးကို စုပ်နေချင်ပါတယ်။လီးဆိုတာကို လက်တွေ့မမြင်ဖူးပေမဲ့ လိုင်းပေါ်ကအပုံတွေထဲမှာတော့ မြင်ဖူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲဒီမြင်ဖူးတဲ့ လီးတွေနဲ့ ကိုကြီးလီးကြီးက ဘာမှကိုမဆိုင်ပါဘူး။
ကိုကြီးလီးကြီးက အရမ်းကြီးတာ ရည်လဲရှည်တယ်။ တုပ်တုပ်မာမာကြီး လီးဒစ်ကြီးကလဲ ဖူးထနေတာပါပဲရှင်။အစက အဲလောက်ကြီးတဲ့ လီးကြီးကို ကျွန်မအဖုတ်ထဲ သွင်းလို့မရဘူးလို့ ထင်ခဲ့တာ လက်တွေ့အလိုးခံကြည့်လိုက်တော့မှ မဝင်ဘူးဆိုတာ မရှိမှန်းသိသွားရပါတယ်။ကိုကြီးလီးကြီး ကျွန်မအဖုတ်ထဲကိုဝင်လာရင် တင်းတင်းဆို့ဆို့ကြီးနဲ့ ဒစ်ကြီးက စောက်ခေါင်းအတွင်းသားနုနုလေးတွေကို ပွတ်ဆွဲနေတော့ အရမ်းခံလို့ကောင်းတာပါပဲ။အဲဒါကြောင့်လဲ အမေတို့လစ်တာနဲ ကျွန်မလဲ ကိုကြီးနဲ့လိုးခဲ့ပါတယ်။တခါတလေများဆိုရင် အိမ်ကလူတွေဘေးမှာပဲ ကျွန်မကထိုင်းပြီး ကိုကြီးကို ထဘီအောက်စလွှတ်ပြတာလေ။အမေတို့ကတော့ မသိဘူး မမြင်ဘူးပေါ့ရှင်။အဲလိုအခါမျိုးဆိုရင် ကျွန်မအဖုတ်ကိုကြည့်ပြီး ကိုကြီးလီးကြီးတောင်နေမယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိတာပေါ့။လူတွေကြားမှာ ကိုကြီးကို အဖုတ်လှန်ပြရတာက စိတ်ထဲမှာအရမ်းကို ဖီးကြွတာပဲ။တခါတလေဆို ကျွန်မက ထဘီအောက်စလွှတ်ပြီး အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေပါ ဖြဲပြတာလေ အစိလေးလဲ ပွတ်ပြတာပဲ။အမေတို့ကတော့ ကျွန်မတို့ကို မောင်နှမတစ်ဝမ်းတွေပဲဆိုပြီး သတိမထားမိကြဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ အဲဒီမောင်နှတစ်ဝမ်းကွဲက လိုးပြီးနေကြပြီဆိုတာတော့ မသိကြဘူးပေါ့ရှင်။တခါတလေကြ ကျွန်မတွေးမိတယ် ရည်းစားထားပြီး အလိုးခံရင်တောင် ကိုကြီးနဲ့အလိုးခံသလိုကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့လေ။ဘာလို့လဲဆိုရင် ကိုကြီးနဲ့ကျွန်မမောင်နှမတစ်ဝမ်းကွဲချင်း လိုးနေကြတာဆိုတဲ့ အသိက ပိုပြီး စိတ်လာစေတာကြောင့်ပါ။
မောင်နှမတစ်ဝမ်းကွဲချင်း လိုးနေကြတယ်လို့ တွေးမိယုံနဲ့တင် ကျွန်မအဖုတ်ထဲက လှိုက်လှိုက်ပြီး ယားလာပါတယ် စောက်ရည်တွေ ထွက်လာနေရပါတယ်။မောင်နှတစ်ဝမ်းကွဲချင်း လိုးရတဲ့အရသာက ကောင်းလွန်းတော့ ကျွန်မနဲ့ ကိုကြီးလဲ လူလစ်တာနဲ့ လိုးကြတော့တာပေါ့။အချိန်မရရင်တော့ ကျွန်မကကိုကြီးလီးကြီးကိုကိုင်ပြီး ဂွင်းထုပေး ကိုကြီးက ကျွန်မအဖုတ်ကို လက်နဲ့လိုးပေး လုပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကျွန်မက အဖုတ်အယက်ခံရတာကို ပိုကြိုက်တော့ လူလစ်တာနဲ့ ထဘီကို မလှန်ပြီး ကိုကြီးမျက်နာကို အဖုတ်နဲ့ပွတ်လေ့ရှိပါတယ်။ကိုကြီးကို အဖုတ်ယက်ခိုင်းရင် လွယ်အောင်ဆိုပြီး အတွင်းခံကိုတောင် သိပ်ပြီးမဝတ်တော့ပါဘူး။ဒါမှလဲ လူလစ်တာနဲ့ ကိုကြီးကိုထိုင်ခိုင်းပြီး ကျွန်မက ကိုကြီးမျက်နာကို အဖုတ်နဲ့ပွတ်လို့ရမှာလေ။ကျွန်မကထဘီလှန် ပေါင်တွေကားပြီး ကိုကြီးမျက်နာပေါ်ကို အဖုတ်တင်လိုက်ပြီဆိုရင် ကိုကြီးက သူ့လျှာကြီးကိုထုတ်ပြီး အဖုတ်ကို အောက်ကနေပင့်ပြီး ယက်ပေးတာလေ။ပြီးသွားရင် စောက်ရည်တွေက အရမ်းထွက်တော့ ကိုကြီးပါးစပ်ထဲကို ဝင်ကုန်တာပေါ့အရမ်းကောင်းတာပါပဲရှင်။ကိုကြီးမျက်နာဆိုရင် ကျွန်မအဖုတ်ကထွတ်တဲ့ စောက်ရည်တွေကို ပေပွနေတာပါပဲ။အဲလိုအခါမျိုးဆိုရင် ကျွန်မသိပ်ပြီး ကျေနပ်တာပဲ ကျွန်မထက်အသက်အများကြီးကြီးတဲ့ အကိုတစ်ဝမ်းကွဲကို ကျွန်မအဖုတ်ထဲကထွက်တဲ့ စောက်ရည်တွေကို တိုက်ရတာက စိတ်ထဲမှာ ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထအောင်ကို ခံစားရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲ မောင်နှမတစ်ဝမ်းကွဲတော်တဲ့ ကျွန်မနဲ့ကိုကြီးက နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုပဲ လူလစ်တာနဲ့ လိုးနေကြပါတယ်။ရာသီလာတဲ့ရက်တွေဆိုရင် ကျွန်မက ကိုကြီးလီးကြီးကို စုပ်ပေးပါတယ်။အိမ်ကလူတွေမလစ်လိုက်နဲ့ လစ်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်မအဖုတ်ကို ကိုကြီးကိုယက်ခိုင်းပါတယ်။ကျွန်မကလဲ ကိုကြီးလီးကြီးကိုစုပ်ပေး ကျွန်မအဖုတ်ကိုလဲ ကိုကြီးက ယက်ပေးနဲ့ သာယာတဲ့ဘဝလေးဖြစ်နေတော့တာပေါ့ရှင်။ ပြီးပါပြီ